မဟောင်းသွားနိုင်တဲ့ သူရဲ့ ဆွေးဆောင်မှုတွေဟာ နောက်ဘ၀တွေမှာလည်း လူသားတွေ အတွက် ကာမာရာဂတွေ လှုပ်ရှာပေးနေဦးမှာပဲ။ ညညတွေဆို သူလေးက အမြဲ ပေးလေ့ရှိတာကတော့ စိတ်ကျေ နပ်စရာကောင်းတဲ့ ဒါလေးပါပု
၁ပုံ.ပုံ. မှာ နယ်တွင်နေသူဖြစ်ပြီး မော်လ်ဒယ် မင်းသမီး ဖြစ်ချင်နေတာမို. သူတို.မြို.တွင် ရှိုးပွဲ လုပ်စဉ်က ပါလာသည်. မော်လ်ဒယ် ဒယ်နီ ဆိုသည်. ဂေါ်ရခါးကပြား ကုလားဖြူတယောက်ကို မိတ်ဆက်ပြီး မော်လ်ဒယ်ဖြစ်ချင်တာပြောလိုက် သဖြင်. ဒယ်နီ က ၀ါသနာပါလျှင်ာညေိေူပေ သို.လာခဲ.ရန် ပြောပြီး လိပ်စာပေးကာ ပုံ.ပုံ. အားကျအောင်ပြောထား လိုက်သည်၊ပုံ.ပုံ. မှာ သူတို.မြို.လေး မှ ခေူနညိမေ တွင်ပါဘူးပြီး ကိုယ်လုံးမှာ ၃၃-၂၀-၃၆ မို.အတော်ကြည်. ကောင်းကာ ခါးသေးသေးလေး နှင်. ဖင်မှာ ကားစွင်.နေတာမို. မြင်သူတိုင်းလိုးချင် စရာ အသား က ဖြူဖွေးနေကာ တရုပ်မင်းသမီးလေး နှင်.ပင်တူတော.သည်၊တနေ.မှာ ပုံ့ပုံ့ မှာ ဒယ်နီ ကိုဆက်သွယ်ပြီားညေိေူပေ သို.ရောက်လာခဲ.ပါသည်၊ သူ.ကိုယ်ပိုင် အခန်းကလည်း ရှိတာမို. အဆင်ပြေလှသည်၊ ထို.နောက် ဒယ်နီ ကိုဖုန်းဆက်ကာ သူရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောရင်း မော်လ်ဒယ် သင်တန်း တက်ရန်မေးလိုက်ပါသည် “ ကိုဒယ်နီသမီး ဘယ်တော.လောက် စတက်ရမှာလဲ ဟင် မြန်မြန်နော် ပြီးရင်လဲ ပွဲတွေမှာသမီးကိုထည်.ပေးနော် ဟင်. ဟင်. ကိုဒယ်နီ ကိုဘဲ အားကိုးပြီး နယ်က တယောက်ထဲလာခဲ.တာ ” ဒယ်နီ လည်းနယ်မှာတွေ.ထဲက ပုံ့ပုံ့ ကို လိုးချင်နေတာ စားရကံကြုံပြီမို. ကျေနပ်နေကာ “ စိတ်ချ မနက်ဖြန်သင်တန်းကိုလာခဲ. နေရာသိတယ်မဟုတ်လား ပုံ့ပုံ့ တယောက်ထဲကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိ သင် ပေးမယ်ဟဲဟဲဟဲ ပုံ့ပုံ့ က အောင်မြင်မှာပါ ကိုယ်လုပ်ပေးပါ.မယ်” ဟု အချိုသပ်နေပါသည်၊ပုံ့ပုံ့ ကတော. မသိရှာဘဲ ကျေနပ်နေပါသည် တကယ်တော. ပုံ.ပုံ. ကလည်း ပက်ကင်ပွင်.ပြီးသား နယ်မှာတုန်းက သူ.အဖေ၏ တပည်.နှင်. ကားမောင်းသင်ရင်း အလိုးခံဘူးသူမို. လီးနှင်.သိပ်မစိမ်းပါ၊ နောက်နေ.ရောက်တော. သင်တန်းအခန်းသို. ရောက်သွားပြီး ဒယ်နီ က သူ.ဆီမှမော်လ်ဒယ် အချို.နှင်. မိတ်ဆက်ပေးပြီး ပုံ.ပုံ. ကိုလဲ သင်ပြပေးကာ တပတ်ခန်. အကြာတွင်ဒယ်နီ က သင်တန်းပိတ်ရက်တွင် ပုံ.ပုံ. အား သီးသန်. သင်ပေးမယ်ဟုပြောပြီး ညာခေါ်လိုက်ပါသည်၊ထိုနေ.ရောက်တော. ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ လိုက်ဝယ်ပေးသည်. အတိုင်း ကြိုးတချောင်းဘမေူနျင်္အကျီပါးလေးနှင်.အောက်က စကဒ်အတိုအကျပ်ဝတ်ကာ သင်တန်းအခန်းသို. ရောက်လာပါသည်၊ဒယ်နီ က “ လာ ခဏထိုင်အုံး အအေးသောက် ” ဆိုကာ အသင်.ဖျော်ထားသည်. ကာမစိတ်ကြွဆေး နှင်. ၀ိုင်နဲနဲ ရောထားသည်.ထားသည်. အအေးခွက်ကမ်းပေးလိုက်ပါသည်၊အအေးသောက်ပြီး ခဏနေတော. ဒယ်နီ က “ ကဲ ပုံ.လေးရေ သီချင်းဖွင်.ပေးမယ် လမ်းလျှောက်ကျင်.ရအောင် ” ဆိုလိုက်သဖြင်. ပုံ.ပုံ. လည်း ခအေတေူု ပေါ်တက်ကာ သီချင်းနှင်. အညီဖင်ကိုလှုပ်ခါကာ လမ်းလျှောက်ကျင်.ရင်း ဘေးပတ်ပတ်လည် တွင် မှန်များတတ်ထားတာမို.ကိုယ်.ပုံကိုယ် ပြန်မြင်နေရကာ ကျေနပ်နေပါသည်၊ နောက်တော. ဒယ်နီ တက်လာပြီး “ နေအုံးပုံ.လေးရဲ. မှားနေပြီ ခါးလေးက ဒီလိုနွဲ. ကိုယ်နဲနဲမတ် ဟုတ်ပြီ ဖင် ကိုရမ်းပြီးလျှောက် ” ပြောရင်း၂သင်ပြရင်း ပုံ.ပုံ. ကိုအနောက်မှဖက်ကာ ခါးကိုင် ဖင်ကိုင် လုပ်ပေးလိုက်ရာ ကာမဆေးတန်ခိုးကလည်းပြနေပြီမို. ပုံ.ပုံ.မှာ ဖင်စအို ရွစိရွစိဖြစ်လာပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း အချေနေကြည်.ကာ “ နေအုံး ပုံ.လေးရဲ. တလှမ်းချင်းလျှောက် ဖင်ကိုတလုံးချင်း ခါရမ်းပြီးလျှောက် ” ဟုဆိုကာ ပုံ.ပုံ. လမ်းလျှောက်သည်. အနောက်မှ လိုက်ကာ ပုံ.ပုံ.၏ ဖင်ကြီး ကိုကိုင်ကာ ခါးနွဲ.ပုံ ပြပေးရင်း ပုံ.ပုံ.၏ ဖင်ကြီးကို ပွတ်သပ် ကာ နူးနပ် နေပါသည်၊စာ ၀၁/၂ပုံ.ပုံ. လည်း ကာမစိတ်ကြွဆေး တန်ခိုး ကလည်းပြ ဒယ်နီ၏ အကိုင်အတွယ် ကလည်းကောင်းတာမို. ဖင်စအိုဝ ရွစိရွစိ နှင်. စောက်ပတ် အရည်ကြည်စို. ကာ အလိုးခံချင်စိတ်များထကြွလာပါတော.သည်၊ဒယ်နီ လည်း မှန်ထဲမှ တဆင်. ဏှာထနေပြီ ဖြစ်တဲ. ပုံ.ပုံ. မျက်နှာ ဖြူနုနုလေး အားကြည်.ကာ “ မောနေပြီလား ပုံ.လေး ကိုယ်က ပုံ.လေး ကို ချစ်လွန်းလို. အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမှာ သိလား ” ဟု အနားကပ်ကာ လေပြေလေး ဖြင်.ပြောရင်း ပုံ.ပုံ. ကို အနောက်မှ သိုင်းဖက်ထားလိုက်ကာ ပုံ.ပုံ. ဖင်ကြီး ကို ဘောင်းဘီ အောက်မှ ရုန်းထနေသည်. သူ.လီးကြီး နှင်.ထောက်ထားလိုက်သည်၊ ဒယ်နီ. လီး မှာ ၇ လက်မရှိပြီး စသုေ အချိုရည်ဘူးလောက် တုတ်တာမို.တခါနှစ်ခါလောက်သာ အလိုးခံဘူးသည်. ပုံ.ပုံ. အဖို.တော. အတော်ပင် အရသာတွေ.လောက်ပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်ခံနေတာမို. ကြိုးတချောင်း င်္အကျီပုခုံးကြိုးကိုလက်မောင်းရင်း သို. အသာလျှောချကာ ပုံပုံ.၏ ဖြူဖွေးနုအိ သည်. နို.မို.မို.ပြည်.ပြည်.လေးကိုကိုင်ကာ နယ်ကာ နှင်. ပန်းနုရောင် နို.သီးခေါင်းလေး ကို ချေပေးလိုက်ရာ ပုံပုံ. မှာ ကာမပိုးများရွထ လာပြီး “ အာ. ဟာ. အင်. . . ဟင်. အို. ကိုရယ် အဟင်. ဟင်. အာ. ” နှင်. ညည်းညူရင်းဖင်ကြီး အနောက်သို.ကောက်ကာ ဒယ်နီလီးကြီးနှင်. ပွတ်တိုက်ပေးနေပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. မှာနဂိုကပင်ဒယ်နီ ကို အထင်ကြီးအားကျနေတာမို. မငြင်းနိုင်ဘဲ ဖင်လှန်ပေးချင် အလိုးခံချင် နေပါတော.သည်၊ ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ. နို.အစုံကို နယ်နေရင်း ပုံ.ပုံ.၏ လည်တိုင်ကိုပါ စုပ်နမ်းလိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ.မှာ ပိုလို. ကာမပိုးများ ရွထလာကာ စောက်ပတ်တခုလုံး စောက်ရည်များ စိုရွှဲကာ စအိုဝမှာပွစိပွစိနှင်. အရသာထူးကို မျက်တောင်မှေးစင်းကာ ခံစားရင်း ဒယ်နီခေါင်းကိုလက်ပြန်ဖက်တွယ်ထားပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း တဆင်.တက်ကာ လက်တဖက်က ပုံ.ပုံ.၏ စကဒ်အတိုအကျပ်လေးကိုအပေါ်မ လှန်ကာ ပင်တီထဲ လက်ထဲ.ပြီး ပုံ.ပုံ.စောက်ပတ်ကို နှိုက်လိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. မှာ စောက်ပတ်သာမက ပင်တီမှာပါ စောက်ရည်များ ရွှဲနေကာ အတော်ပင် ထန်နေပြီမှန်း သိသွားတာမို. စောက်စေ.လေးကို ပွတ်ချေပေးလိုက်ပါသည်၊ “ အာ. ဟာ. အို. ကိုရယ် အိ. အာ. အင်. အဟင်. ဟင်.ဟာ. အို. ဟို. အင်. အင်. အာ. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. မှာ အသံထွက်ကာ တွန်.လိမ်ရွထနေပါတော. သည်၊၃ထို.နောက် ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ. အား ဆွဲလှည်.ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်းရင်း လက်နှစ်ဖက်ကပုံ.ပုံ.၏ ကောက်ပြီး ကားစွင်.လုံးဝိုင်း နေသည်. ဖင်ကြီးကို ဖြဲကိုင်ကာ နယ်ပေးနေပါသည်၊ ပုံ.ပုံ.ကလည်း ခြေဖျားထောက်ကာ ဒယ်နီ ကိုပြန်နမ်းစုပ်ရင်း လျှာချင်း အပြန်အလှန် ထိုးကလိပေးကာဒယ်နီ၏ လည်ဂုတ်ကို ဖက်ထားလိုက်ပါသည်၊နောက်တော. ဒယ်နီ က “ ကဲ ပုံ.လေး ညောင်းနေ ရောပေါ. ဒေါက်မြင်.ရှုးနဲ.ဆိုတော. ထိုင်ရအောင် ” ဟုပြောကာ ခအေတေူု ဘောင်တွင် ထိုင်လိုက် ပြီး ပုံ.ပုံ. က သူ.ဘေးနားထိုင်လိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. ပုခုံးကို ဆွဲလှည်.ကာ နှုတ်ခမ်းပါးလေး ကို စုပ် နမ်းလိုက်ရင်းလက်တဖက်က စောက်ပတ်ကို နှိုက်ကာ စောက်စေ.လေးကို ကလိနေတာမို. ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ နှိုက်လို. ရအောင် ပေါင်ဖြဲကားပေးလိုက်ပြီး စကဒ်ကို လှန်တင်လိုက်ပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း နှုတ်ခမ်းကို နမ်းစုပ်နေရာမှ ပုံ.ပုံ. ကြိုးတချောင်းင်္အကျီ ကို ချွတ်လိုက်ပြီးပုံ.ပုံ.၏ နို.ဖြူမို.မို.ဖောင်းဖောင်းလေး ကိုတပ်မက်စွာကြည်.ရင်း နို.သီးခေါင်း နီရဲရဲလေးကိုစုပ်နမ်းစာ ၀၁/၃ကာ သွားဖြင်. နို.သီးခေါင်းလေး ကိုအသာကိုက်ပေးလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. မှာ တွန်.လိမ်ကာ “ အာ. ဟာ.အင်. ဟင်. ဟင်. အို. အကိုရယ် အိ. အာ. ဟာ. ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အင်. အဟင်. တမျိုးကြီးဘဲ အာ. အာ. ဟာ. ဟင်. ဟင်. ” ဟု ညည်းညူရင်း ဒယ်နီ၏ ခေါင်းကိုဖက်ကာ ပေါင်ကိုလည်းဖြဲကားကာ ခါးကော.ပေးနေပါသည်၊ဒယ်နီ မှာ ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ် ကိုလက်တဖက်က နှိုက်နေတာမို. စောက်ရည်များ ရွှဲကာပုံ.ပုံ. မှာ အတော်ပင် ရွနေပြီမှန်းသိသော်လည်း တမင် မလိုးသေးဘဲ အချိန်ဆွဲကာ ကလိနေပြီးတမျိုးပြောင်းရန် ခအေတေူု ပေါ်မှဆင်းကာ ပုံ.ပုံ.ရှေ. ၀င်ရပ်လိုက်ပြီး ပုံ.ပုံ.၏ ပင်တီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. ကလည်း အလိုက်သင်. ဖင်ကြွပေးလိုက်တာမို. အလွယ်တကူ ကျွတ်သွားပြီးဒယ်နီက “ ရှုပ်ပါတယ် ပုံ.လေးရာ စကဒ်ပါ ချွတ်လိုက်တော. ” ဆိုရင်း ပုံ.ပုံ. စကဒ်ကို ဆွဲချွတ်နေရာပုံ.ပုံ. က ရှက်နေသေးတာမို. “ ဟာ ကိုရယ် ရှက်စရာကြီးဒီလိုလှန်ပေးထားမယ်လေ ” ဟုပြောရင်းစကဒ် ကို ကိုင်ထားတာမို. ဒယ်နီ က “ ဘယ်ကောင်းမှာလဲ ကိုယ် က ပုံ.လေး စောက်ပတ် ကိုလျှက်ပေးမှုတ်ပေး မလို. ” ဟုပေါ်တင်ပြောလိုက်ပါသည်၊ပုံ.ပုံ. မှာ နယ်မှာတုန်းက သူ.အဖေ၏ တပည်. ကားမောင်းသင်ရင်း လိုးတုန်းကတော.ကားပေါ်မှာ ခြုံထဲမှာ ကားဂိုထောင်ထဲမှာမို. င်္အကျီဟ ထမီလှန်ကာပင် အလိုးခံဘူးတာမို. ပြီးတော. ဘေးက မှန်ပတ်ပတ်လည် နှင်.မို. ပြန်မြင်နေရကာ ရှက်နေပြီး စောက်ပတ် အလျှက် တခါမှ မခံဘူးတာမို. ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတုန်း ဒယ်နီ က မြန်မြန်ပင် ပုံ.ပုံ. စကဒ်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. လည်း ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွားကာ မှန်ထဲမှာ ပြန်မြင်နေရပါသည်၊ထိုအချိန် ဒယ်နီ ကလည်း သူဘာသူင်္အကျီ ဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက်ရာ လီးကြီး ကိုကြည်.ကာ အကြီးကြီးမို. ပုံ.ပုံ. မှာ ရင်တုန်နေကာ သူ အလိုးခံဘူးသည်. လီးမှာ ၆ လက်မသာမို.၄ပြီးတော. ဒယ်နီ လီးမှာ တော်တော်တုတ်တာမို. လန်.နေပါသည်၊ ဒါကြောင်.လည်း ဒယ်နီ ၏လီးကြီး နှင်. အလိုးခံဘူးသည်. မော်လ်ဒယ်မလေးများ စွဲသွားကာ မခွာနိုင်ဖြစ်ကာ ဒယ်နီအသုံးချတာခံနေရတာဖြစ်သည်၊ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ.ခြေထောက် ဒူးဂေါင်းကွေးမှ ကိုင်ကာ အဖျားနားထိ ဆွဲရင်း “ ကဲ ပုံ.လေးဖင်ကြီးကို အဖျားနားထိရွှေ.ပြီး ဒူးကွေးပြီး ပေါင်ဖြဲထားပေး ဟုတ်ပြီ ” ဟုပြောလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ.ကလည်း ခိုင်းသည်. အတိုင်း လက်နောက်ပြန်ထောက်ကာ ဒူးကွေးပြီး အစွမ်းကုန် ပေါင်ဖြဲကားပေးလိုက်ရာ နှုတ်ခမ်းသားများ နီရဲနေသည်. စောက်ပတ်လေးမှာ ဖင်သားဖြူဖြူကြား တွင် ထင်းနေကာ စောက်ရည်များ စိုလက်နေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ဒူးထောက်ကာ ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ် ကိ လျှက်ပေးမှုတ်ပေးကာစောက်စေ.လေးကို လက်တဖက် က ဖြဲကာ လျှာဖြင်. ထိုးကလိ ပေးလိုက်ရာ “ အာ. ဟာ. အိ. ဟင်. ဟင်. အင်.အို. အမေ. ဟာ. အာ. အင်. ကိုရယ် ဟင်. ဟင်. ဟာ. အာ. ” ပုံ.ပုံ. မှာ ကောင်းလွန်းတာမို.နှုတ်ခမ်းကိုက်ကာ ညည်းညူရင်း ဒယ်နီ ခေါင်း ကိုဖိကိုင်ကာ သူ.စောက်ပတ် နှင်.ကပ်ပေးနေပါသည်၊ ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ. စောက်စေ.လေး ကို လျှာဖျားဖြင်. ထိုးကလိ လိုက် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ရဲရဲလေး ကို စုပ်ယူလိုက် စောက်ပတ်ဝ ကို လျှာဖြင်.လျှက်လိုက်နှင်. တခါတခါ ဖင်ကြားထဲလျှာဖျားလေး နှင်. လျှက်ပေးရင်း ပုံ.ပုံ.၏ စအိုဝ ကိုပါ လျှာဖြင်. ကလိပေးလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. အဖို.ကာမအရသာထူးများ ခံစားနေရတာမို. တွန်.လိမ်ကာ မျက်တောင်မှေးစင်းပြီး ညည်းညူနေပါစာ ၀၁/၄တော.သည်၊ “ အာ. အာ. ဟာ. အို. ဟို. အင်. အင်. ကိုရယ် ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အာ. အာ.အင်. အဟင်. ဟင်. ပုံ.လေး မနေတတ်တော.ဘူး အီး အာ. အာ. ဟာ. ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်ဟင်. ဟင်. အင်. ”ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ.စောက်ပတ် ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဖင်စအိုဝ ပါမကျန် ပယ်ပယ်နယ်နယ်လျှက်ပေးနေရင်း လက်တဖက်က စအိုဝလေးကို စောက်ပတ်မှ စီးကျလာသည်. စောက်ရည်များနှင်. ပွတ်ကာ လက်ညိုးတချောင်း ချော.သွားလိုက်ပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. မှာတော. ကာမသုခ ပြည်.၀ကာ မခံစားဘူးသေးသည်. စောက်ပတ်လျှက်တာ ဖင်စအိုထဲ လက်ထည်.ညှောင်.တာ အစုံခံစားရင်း ဒယ်နီ ပြုသမျှ ငြိမ်ခံနေပါသည်၊အတန်ကြာအောင် ပုံ.ပုံ.စောက်ပတ် ကို လျှက်နေမှုတ်နေတာမို. ဒယ်နီ မျက်နှာ တခုလုံးစောက်ရည်များ ပေကျံနေကာ ဒယ်နီ လည်း တက်လိုးချင်ပြီမို. ထလိုက်ပြီး ပုံ.ပုံ. ကတော. ဒီအတိုင်း ပေါင်ဖြဲကား ပြီး ဒူးကွေးကာ လက်နောက်ပြန်ထောက်လျှက်ဘဲမို. အဆင်သင်.ပင် ဖြစ်နေကာ ဒယ်နီ က သူ. လီးကြီး ကိုကိုင်ကာ ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ်ဝ တေ.ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း သွင်းလိုက်ပြီး တ၀က်ခန်.ရောက်လျှင် ဆက်မသွင်းသေးဘဲ ပုံ.ပုံ. မျက်နှာ အကဲခတ်ကာ “ ပုံ.လေးခံနိုင် တယ်မဟုတ်လား ဟင် ” ဟုမေးလိုက်ပါသည်၊၅ပုံ.ပုံ. ကတော. သူ.စောက်ပတ်ထဲ ဒယ်နီ၏ လီးကြီး ၀င်နေတာ ငုံကြည်.နေပြီး “ ဟာ ကိုကလည်း မသိဘူးသွား ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး ” ဟု ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေပါသည်၊ ဒယ်နီ လည်းသူ. လီး တ၀က်လောက်သာ ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ်ထဲထည်.ကာ ညှောင်.လိုးနေရင်း “ အေးပြီးရောဒါဆို ကို အဆုံးထိ ဆောင်.လိုး မှာနော် ” ဟုပြောလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. လည်း လန်.သွားကာ အခု လီးကြီး တ၀က်ခန်. နှင်.ပင် သူ.စောက်ခေါင်းထဲ ပြည်.သလောက် ဖြစ်နေပြီမို. “ အယ် ကိုရယ်ပုံ.လေး ကို သနားပါအုံး အာ. ဟာ. အီး အား ဟာ. ကျပ်လိုက်တာ ကျွတ်ကျွတ် ဗျွိဗျွိ ဗျွပ်ဘွပ်အင်. အဟင်. ဖြေးဖြေး လုပ်ပါ ကိုရယ် နော် အာ. အာ. ဟာ. ဟင်. အင်. အင်. အမေ. ” ဟုပြောရင်း ညည်းညူကာ အလိုးခံနေပါသည်၊ဒယ်နီ က “ အင်းပါ ပုံ.လေးရာ ချစ်လို. လိုးတာဘဲ နာရင်လဲ အောင်.ခံပေါ.နောက်တော.ကောင်းသွားမှာပါ ” ဟုပြောရင်း ခပ်သွက်သွက် ဆောင်.လိုး လာကာ ပို သွင်းပေးလိုက်ပါသည်၊“ ဗျွိဗျွပ်ဗျွပ် ဘွပ်ဘွပ် ဖျွပ် အီး အား အင်. အင်. အဟင်. အမေရဲ. ကျွတ်ကျွတ် အား နာတယ်ကိုရာ အိ. အိ. အာ. ပုံ.လေး ဗိုက်ထဲက အောင်.တယ် အင်. အင်. အဟင်. အာ. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. မှာအီဆိမ်.နေကာ မျက်နှာ ရှုံမဲ.ပြီး သားအိမ်ခေါင်း ကို ဒယ်နီ လီးဒစ်ကြီး လာဆောင်.တာမို.အောင်.နေပါတော.သည်၊ဒယ်နီ မှာ သူ.လီး အကုန်ပင် မ၀င်သေးဘဲ ၃ပုံ ၂ပုံသာ ၀င်သေးတာမို. အားမရသေးဘဲ ဖြေးဖြေးချင်း တိုးထည်.ကာ လိုးနေပါသည်၊ “ အာ. အာ. ဟာ. ဟင်. အင်. အင်. အို.ကိုရယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ အိ. အိ. အီး အား အမေ. ကျွတ်ကျွတ် အင်. အင်. ဟင်. နာတယ်ကိုရယ်အင်. အင်. အာ. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. မှာ မျက်နှာရှုံမဲ.ကာ ညည်းညူရင်း ပေါင်ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကား ကာအလိုးခံနေပါသည်၊ ဒယ်နီ လည်း တဖြေးဖြေး ချော.သွင်းရင်း အရင်းနားလောက် ရောက်လာသော အခါ တင်းလာပြီမို. “ ပုံ.လေး ကလိမ်မာပါတယ် နဲနဲအောင်.ခံနော် ဒီလကုန်ရင်ရှိုးပွဲရှိတယ်ထည်.ပေးမယ် ဟုတ်လား ” ဟု အချိုသတ်ကာ လက်နှစ်ဘက်က ပုံ.ပုံ. နို.ဖြူဖြူမို.မို. အစုံ ကိုစာ ၀၁/၅ကိုင်ကာနယ်ကာ ဆောင်.လိုး ပါတော.သည်၊ “ ဗျွိဗျွိ ဗျွပ်ဖျွပ်ဖျွပ် ဘွပ်ဘွပ်ဘွတ် ဗျွပ် အီး အားအမေ. ကျွတ်ကျွတ် အာ. အာ. ဟာ. ဟင်. သေပါပြီ အင်. အင်. ဟင်. ကိုရယ် အိ. အိ. အာ.ဟင်. အင်. အင်. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ၏ လီးကြီး သူ.စောက်ပတ်ထဲ တဆုံးဝင်သွားတာမို.အီဆိမ်.နေကာအံကြိတ်ပြီး ကြိတ်မှိတ် အလိုးခံနေရပါသည်၊တဖြေးဖြေး စောက်ရည်များ ပိုရွှဲလာပြီမို. သိပ်မကျပ်တော.တာမို. ဒယ်နီ လည်း ခပ်သွက်သွက် ဆောင်.လိုး လာပြီး ပုံ.ပုံ. လည်း ခံနိုင်လာပြီမို. အောက်မှ ခါးကော. ကော.ပေးနေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း တမျိုးပြောင်းရန် “ ကဲ ပုံ.လေးရေ ပုံစံပြောင်း လိုးရအောင် ကို လိုးပေးတာ ခံလို.ကောင်းတယ်မဟုတ်လား ” ဟုမေးလိုက်ရာ ပုံပုံ. က “ ဟာ ကို ကလဲ ဘာတွေလာမေးနေတာလဲမသိဘူး သွား ” ဟု ပြန်ညုကာ ပြောလိုက်ပြီးမှ “ ဘယ်လိုလုပ်အုံးမှာလဲ ကိုရဲ. ”ဟုမေးလိုက်သည်၊၆ဒယ်နီ က “ ပုံ.လေး လေးဖက်ထောက် ပြီး ဖင်ကုန်းပေး ကို အနောက်ကနေ တက်လိုးမယ်”ဟု ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပင် တမင်ပြောလိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. မှာ ကာမသွေးပို ထကြွလာကာ ဒယ်နီ ပြောသည်. အတိုင်း လေးဖက်ထောက်ကာ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တာမို. စောက်ပတ်မှာ ဖင်ကြား မှပြူးထွက်လာတာမို. ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ.စောက်ပတ် ကို ညှစ်ပြီး စောက်စေ.လေး ကို လက်ညိုးဖြင်.ကလိပေးလိုက်ရာ “ အို. ကိုရယ် အာ. ဟာ. ထည်.ရင်လည်း ထည်.ပါတော. ကိုရယ် ပုံ.လေးမနေတတ်ဘူး အင်. အဟင်. ” ဟု ပုံ.ပုံ. မှာ အလိုးခံလို. ကောင်းတုန်း ရပ်လိုက်တာမို. မချင်.မရဲ နှင်.စောက်ပတ် ကို အနှိုက်ခံရတာမို. ဏှာထန်လာကာ သိပ်မရှက်တော.ဘဲ လိုးဖို. တောင်းဆိုနေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. အနောက်မှ ခွကာလိုက်ပြီး ဒစ်ကိုကုင်ကာ ပုံ.ပုံ.၏ စောက်ပတ်ဝ တေ.ကာ သွင်းလိုက်ရာ စောက်ရည်များ ရွှဲနေပြီမို. တ၀က်ခန်. လျှောကနဲ ၀င်သွားပါသည်၊ ပြီးမှဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. ၏၂၀ လက်မ သာရှိသည်. ခါးသေးလေးကို ကိုင်ကာ ဆောင်.လိုး ပါတော.သည်၊ “ ဗျွိဗျွိ ဗျွပ် ဘွပ်ဘွပ် ဖျွပ်ဈွပ်ဈွပ် ဗျွပ် အာ. အီး အမေ. အင်. အင်. ဟင်. အိ. အိ. ကိုရယ်အို. အင်. အဟင်. ဟင်. အာ. ပုံ.လေး ခံနိုင်လာပြီ သိပ်မနာမအောင်.တော.ဘူး ဆောင်. ကို အင်.အင်. ဟင်. အာ. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. လည်း ဏှာထန်နေပြီမို. အံကြိတ်ခံရင်း ကားစွင်.နေသည်. ဖင်ကြီးကို အနောက်သို. ပစ်ကော.ပေးနေပါတော.သည်၊“ ဗျွိဗျွိ ဗျွပ် ဘွပ်ဘွတ်ဘွတ် ဖျွပ်ဈွပ်ဈွပ် အီး အား အင်. အင်. အို. ကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ အင်. အဟင်. ဟင်. ဆောင်. ဆောင်. အိ. အိ. အာ. ဟာ. ဟင်. ဟင်. အင်. ” နှင်. ပုံ.ပုံ.လည်း ကာမရာဂအရှိန်တက် လာကာ မရှက်တော.ဘဲ တဖြေးဖြေးပြောရဲဆိုရဲ ဖြစ်လာသည်၊ဒယ်နီ က လိုးနေတာ ခဏရပ်ကာ လီးကြီး ကို ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ်ထဲမှ ကျွတ်လုနီး အထိ ထုတ်ထားလိုက်ပြီး “ ပုံ.လေး ကို လိုးပေးတာကောင်းလား ဟင် ” ဟုမေးလိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. မှာ အလိုးခံလို. ကောင်းနေတုန်း အလိုးရပ်ကာ လီးကြီးထုတ်လိုက်တာမို. သူ.စောက်ခေါင်းထဲ ဟာသွားကာ“အင်းပါ ကိုရယ် ကောင်းပါတယ် ” ဟု ရှက်ရှက် နှင်.ဖြေလိုက်ပါသည်၊ဒယ်နီ က ဆက်မလိုး သေးဘဲ “ ဟာ သေချာပြော အလိုးခံလို. ကောင်းရဲ.လား ” ဟု ရစ်ကာ တမင်ပင် ပုံ.ပုံ. နှုတ်ရဲကာ ကာမစိတ် ပိုထရွလာအောင် ကလိနေတာဖြစ်သည်၊ ပုံ.ပုံ. လည်းမအောင်.နိုင်တော.ဘဲ အလိုးခံချင်နေပြီမို. “ ကဲပါ ကိုရယ် ပုံ.လေး ကို လိုးပါတော. ကို လိုးတာပုံ.လေး အရမ်းကြိုက်တယ် ကျေနပ်ပြီလား ဟွင်. ” ဟု ပြောလိုက်ပါတော.သည်၊စာ ၀၁/၆ဒယ်နီ လည်း ကျေနပ်နေကာ “ဟဲဟဲ ပုံ.လေး က ဒါကြောင်. ချစ်ဖို.ကောင်းတာ ” ဟုပြောရင်း ပုံပုံ.၏ ခါးသေးလေး ကိုကိုင်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင်.လိုးပါတော.သည်၊ “ ဗျွိဗျွိ ဗျွပ်ဘွပ် ဘွပ် ဈွပ်ပျွပ် ဗျွပ်ဗျွပ် အီး အား အာ. အာ. အို. ကိုရယ် ကောင်းတယ် ဆောင်. ဆောင်.အင်.အင်. ဟင်. အာ. ပုံ.လေး ကောင်းလာပြီ ပြီးတော.မယ် အာ. ဟာ. အင်. အင်. ဟင်.အဟင်. အီး၇အား ” နှင်. ပုံ.ပုံ. လည်း ကာမရာဂ စည်းစိမ် အထွတ်ထိပ် ရောက်လာပြီမို. သိပ်မရှက်တော.ဘဲဖင်ကြီး ကို ဆောင်.လိုးချက် အတိုင်း အနောက်သို. အစွမ်းကုန် ပစ်ကော.ပေး နေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ဆောင်.လိုး လိုက်တိုင်း ခါရမ်းနေသည်. ပုံ.ပုံ.၏ ဖင် ဖြူဖွေးဖွေး ကားကားစွင်.စွင်. ကြီးကို ကြည်.ကာ ရမက်ဆေးသဖွယ် မှီဝဲရင်း သူ.လီးကြီး စောက်ပတ်ထဲ ၀င်သွားတိုင်းပုံ.ပုံ. ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ စုဝင်သွားကာ ဆွဲထုတ်လိုက်လျှင် နှုတ်ခမ်းသားများ လှန်ထွက်သွားပြီး ကပ်ပါလာတာ ကြည်.ကောင်းနေပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. မှာ ပြီးကာနီးပြီမို. ဖင်ကြီးကိုထောင်ကာ အစွမ်းကုန် ပစ်ကော.ပေးနေရင်း လက်နှစ်ဖက်ဆန်.ထောက်ကာ ဒယ်နီ၏ မျက်နှာကို လည်ပြန်လှည်.ကြည်.ကာ အရသာခံပြီး အလိုးခံနေပါသည်၊“ ဗျွပ်ဗျွပ်ဗျွပ် ဘွပ်ဘွပ် ဗျွိ ဖျွပ်ဖျွပ် ဈွပ်ဈွပ် ဘလွတ် ဘွပ်ဘွတ် အီး အား အို. ကောင်းလိုက် တာ ကိုရယ် အင်. အင်. ဟင်. မရပ်နဲ. ဆောင်. အို. ဟို. ဟာ. ပြီးတော.မယ် အီး အာ.အာ. အင်. အင်. ဟင်. အဟင်. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. မှာ ဏှာထန်ကာ အရှက်မရှိတော.ဘဲ ဘိုမများလိုအသံပေးကာ ဖင်ကြီး ကို ပစ်ကော.ရင်း အလိုးခံနေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. မျက်နှာ ဖြူနုနုလေး ကို ကြည်.ကာ လိုးနေရင်း အချက် ၄၀-၅၀ခန်. မနားတမ်း ဆောင်.လိုးကာ ပြီးသွားတာမို. သုတ်ရည်များ ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ်ထဲ ပန်းထည်.လိုက်ပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. လည်းပြီးသွားကာ စောက်ရည်များ ထွက်သွားကာ စောက်ပတ်တခုလုံးရွှဲနေကာ ဒယ်နီ၏ လီးတန် နှင်. ဆီးခုံ လမွှေးများမှာ ပင်ပေကျံကုန်ပါသည်၊ ဒယ်နီ လည်း စိတ်ထဲကတော်တော် စောက်ရည်ရွှဲတဲ. ကောင်မ ဟုတွေးကာ “ ကဲ ပုံ.လေး ရေချိုးမယ် လာ ” ဆိုကာရေချိုးခန်း သို. နှစ်ယောက်သား ၀င်သွားကြပါသည်။ပုံ.ပုံ. ၏ မော်လ်ဒယ် ဘ၀အစ စောက်ပတ်ရွ ဇာတ်လမ်းပြီးပါပြီ ။ ။စာ ၀၂/၆ ပုံ.ပုံ. နှင်. ဒယ်နီ တို.၏ ရေချိုးခန်း ထဲမှ အခန်းဆက် လိုးပွဲဒယ်နီ နှင်. ပုံ.ပုံ. တို.မှာ တချီပြီးသွားတာမို. ရေချိုးရန် ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားကြပြီးရေအတူချိုးရင်း ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ. ကို ဆပ်ပြာ တိုက်ပေးရင်း နို.ဖြူဖြူဖွေးဖွေး မို.မို.လေး ကို တပ်မက်စွာ ပွတ်နယ်ပေးလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. လည်း ကာမ ခလုပ် နှိပ်လိုက်သကဲ.သို. ရွထလာပြီး ဒယ်နီ၏ မျက်နှာကို တပ်မက်စွာ ငေးကြည်.ရင်း ဒယ်နီ၏ ရင်အုပ်ကားကားကြီး ကို ပွတ်သပ်နေပါသည်၊ ဒယ်နီ က “ ပုံ.လေး နို.တွေက ကိုင်လို.ကောင်းတယ် တင်းတင်းလေး ကိုယ်လုံးလေး ကစာ ၀၂/၇၈လည်းလှ ဖင်ကြီး ကလည်း ကောင်း တရုပ်မင်းသမီးလေး နဲ.တူတယ် အောင်မြင်မှာသေချာတယ်၊ဟု မြှောက်ပြောရင်း လက်တဖက်က ပုံ.ပုံ.စောက်ပတ် ကို နှိုက်ကာ စောက်စေ.လေးကို ကလိပေးလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. လည်း ခြေဖျားထောက်ကာ တွန်.လိမ်လာပြီး “ အာ. ဟာ. ကိုရယ် အို. အင်.ဟင်.”နှင်. အသံထွက်လာပါသည်၊ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ. ၏ ဖီးလ်တက်ကာ နှုတ်ခမ်းကိုက်ပြီး မျက်တောင်မှေးစင်း ခံနေသည်.မျက်နှာလေး အား ကြည်.ရင်း နှုတ်ခမ်း ကို နမ်းစုပ်လိုက်ပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ၏ လျှာကိုစုပ်ယူရင်း ခြေဖျားထောက်ကာ ဒယ်နီ၏ လည်ဂုတ်ကို ဖက်ထားလိုက်ပါသည်၊ ထို.နောက် ဒယ်နီက ပုံ.ပုံ. ၏ ကားစွင်.လုံးဝိုင်းပြီး ကော.နေသည်. ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက် ဖြင်. နယ်ပေးကိုင်ပေးနေပြန်ပါသည်၊ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ နှင်. နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုပ်နေရင်း သူ.ဆီးခုံ ကိုလီးကြီးလာထောက်နေတာမို. စောက်ပတ် စိုစိစိုစိ ဖြစ်လာပါသည်၊ ဒယ်နီ က နမ်းနေတာရပ်ပြီး “ ပုံ.လေး ကို.လီးစုပ်ပေးကွာ ” ဟုပြောလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. မှာ “ ဟာ ကို ကလဲ ပုံ.လေး တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး ” ဟု မူနေသဖြင်. ဒယ်နီ က “ မလုပ်ဘူးလဲ ဏှာကား ကြည်.ဘူးတယ်မဟုတ်လား အဲဒီလို စုပ်ပေါ. မခက်ပါဘူး ဘာလဲ မစုပ်ပေးဘူးလား ” ဟု ပြောလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. လည်း မော်လ်ဒယ်မလုပ်ရမှာစိုးကာမငြင်းနိုင်တော.ဘဲ “ အင်းပါ လုပ်ပေး ဟို ဟို စုပ်ပေးပါ.မယ် ကို. သဘောပါ ” ဟုပြောရင်းဒယ်နီရှေ. ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ.မျက်နှာရှေ. မာန်ဖီနေသည်. လီးကြီးကိုမရဲတရဲ ကိုင်ကာနှုတ်ခမ်းပါးလေး ဖြင်. စုပ်ငုံပေးလိုက်ပြီး သူကြည်.ဘူးသည်. ဏှာကားထဲကလိုလျှာဖျားလေးဖြင်.ဒစ်ပတ်လည် နှင်. လီးတန်အောက်က အကြောကို လျှက်ပေးလိုက်ရင်း တခါတခါ ဂွေးဥကိုပါလျှက်လိုက်စုပ်လိုက် လုပ်ပေးလိုက် လီးကြီး ကို အာခေါင်ထဲထိ မြိုချလိုက် နှင်. တတ်သမျှမှတ်သမျှ ပြုစုပေးနေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. ပါးစပ်ထဲ သူ.လီးကြီး ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာကြည်.လိုက်ဒူးထောက်ထိုင်နေတာမို. ကားစွင်.ကာ ကော.ကောက်နေသည်. ပုံ.ပုံ.၏ ဖင်ကြီး ကိုကြည်.လိုက်နှင်. ကာမစည်းစိမ် ခံစားနေပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. လည်း တဖြေးဖြေး လီးစုပ်သည်. အရသာကို ကြိုက်လာတာမို. စိတ်ပါလက်ပါ မျက်တောင်မှေးစင်းကာ ဒယ်နီ၏ လီးကြီး ကို စုပ်ငုံနေပါတော.သည်၊ရေပန်းကလည်း ဖွင်.ထားတာမို. မိုးရွာထဲမှာလို ဖြစ်နေကာ ဒယ်နီ မှာ ကျေနပ်နေကာ ဒီလို မနူးမနပ် မော်လ်ဒယ်ရူးမလေးတွေ စားနေကြ လိုးနေကြ နောက်ပြီး လိုးလို. ၀လျှင် သူ. မိတ်ဆွေလော်ပန် တွေ ဆီပို.ပေးလိုက်ကာ သူ.အတွက်ငွေလည်းရ ကောင်မလေးတွေ ကတော. ဟိုလူကလိုး ဒီလူက လိုး နှင်. စပွန်စာရသူရ ကာ တချို.လည်း ဖာဖြစ်သွားကြပါသည်၊အတန်ကြာအောင် ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ၏ လီးကြီး ကို စုပ်ပေးနေပြီးနောက် ဒယ်နီ က“ ကဲ ပုံ.လေး တော်ပြီ ထတော. ကို လိုးချင်ပြီ ” ဟုပြောလိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. လည်း လီးစုပ်နေတာရပ်ပြီး မတ်တတ်ထ ကာ ဒယ်နီ. ကို ဖက်ထားလိုက်ရင်း “ ပုံ.လေး က ကို. ကိုချစ်လို.အကုန်လုပ်ပေးတယ်နော် ပြီးမှ ပုံ.လေး ကိုပစ်မထားနဲ. ရှိုးပွဲတွေမှာထည်.ပေးရမယ် ” ဟု ညုကာချွဲလိုက်ပါ၉သည်၊ ဒယ်နီ က ပြုံးရင်း “ အင်းပါ ပုံ.လေးရဲ. လုပ်ပေးမှာ အကုန်လုပ်ပေးမှာ ဖင်ပါချပေးအုံးမှာ”ဟုပြန်ပြောလိုက်ပြီး ပုံ.ပုံ. ကို ရေချိုးခန်း နံရံဖက် တွန်းလိုက်ပြီး “ ကဲ ပုံ.လေး နံရံဖက်လှည်.လက်ထောက်ပြီး ဖင်ကောက်ပေးထား ခြေနဲနဲ ကားထား ” ဟုပြောလိုက်ပါသည်၊စာ ၀၂/၈ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ ပြောသည်. အတိုင်း နံရံကို လက်ထောက်ကာ ဖင်ကောက်ကာ ခြေနဲနဲကားပြီးနေပေးလိုက်သည်၊ ဒီပုံစံ ကတော. သူ နယ်မှာတုန်းက ကားဂိုထောင်ထဲမှာကုန်းဘူးအလိုးခံဘူး သည်. ပုံစံမို. နေတတ်ပေးတတ်ပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. ၏ ကော.ပြီး ကားစွင်.နေသည်. ဖင်ကြီး ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင်. ဖြဲကိုင်ကာ ဒစ်ကို ပုံ.ပုံ.စောက်ပတ်ဝ ချိန်ပြီး ထည်.လိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. ကလည်း အလိုက်တသိပင်ဒယ်နီ၏ လီးကြီး ကိုကိုင်ကာ သူ.စောက်ပတ်ဝ တေ.ပေးလိုက်တာမို. လျှောကနဲဝင်သွားပါတော.သည်၊“ ဗျွိဗျွိ ဘွပ် ဗျွပ်ဗျွပ် ဘွတ်ဖျွပ် အီး အား ဟာ. ကိုရယ် အရမ်းဘဲ အင်. အင်. အာ. အိ. အိ. ဟင်.” ပုံ.ပုံ. မှာ ဒယ်နီ ဆောင်.လိုး လိုက်တာမို. အီဆိမ်.သွားကာ မျက်နှာရှုံမဲ.ပြီး ညည်းနေပါသည်၊ဒယ်နီ ကတော. ပုံ.ပုံ.၏ ခါးသေးသေးလေးမှ ကိုင်ကာ ဆောင်.လိုးမြဲလိုး နေပါသည်၊ပုံ.ပုံ. မှာ မော်လ်ဒယ်ဖြစ်မယ် ဆိုသည်. မျှော်လင်.ချက်နှင်. ဒယ်နီ ပြုသမျှ လိုးသမျှခံနေရင်း သူကိုယ်တိုင် ကလည်း ဏှာထန်သူလေးမို. အလိုးခံရတာ ဖီးလ်တောင်ရသေးတယ်ဟု သဘောထားကာ ကျေကျေနပ်နပ် အလိုးခံနေပါတော.သည်၊“ ဗျွိဗျွိ ဗျွပ်ဗျွပ်ဗျွပ် ဘွပ်ဘွပ် ဘွတ်ဖျွပ် ဈွပ်ဈွပ် အာ. အာ. အို. ကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာအင်. အင်. အဟင်. အာ. ရတယ် ဆောင်. ဆောင်. အိ. အိ. အာ. ဟာ. ဟင်. ဟင်. အင်. ” နှင်.ပုံ.ပုံ. မှာ ကာမရာဂစိတ် ထကြွ နေပြီမို. အသံထွက်ကာ အလိုးခံရင်း ဖင်ကြီးကို ကောက်ပေးထားပါသည်၊ ဒယ်နီ ကတော. ဆောင်.လိုး လိုက်တိုင်း ပုံ.ပုံ.၏ ဖင်ကြီး ကော.ကာ ခါရမ်းနေတာ အရသာခံ ကြည်.ရင်း ပုံ.ပုံ.၏ ခါးသေးလေး ကိုကိုင်ကာ မညှာမတာ ဆောင်.လိုးနေပါသည်၊“ ဗျွိဗျွိ ဘွပ်ဘွပ် ဖျွပ်ဈွပ်ဈွပ် ဗျွပ်ဗျွပ် အင်. အင်. ဟင်. အာ. အီး အမေ. ကျွတ်ကျွတ်အာ. အာ. ဟာ. ဟင်. အင်. ကိုရယ် မရပ်နဲ. ဆောင်. ဆောင်. ” ဟု ဏှာထန်နေပြီမို. မရှက်နိုင်တော.ဘဲ ဘိုမများလို အသံပေးနေပါသည်၊ ဒယ်နီ က ပုံ.ပုံ. ကို တက်လိုးနေရင်း “ ပုံ.လေးကလည်း ဘာ ဆောင်. ဆောင်. လဲ ဆောင်.လိုးပေး လို.ပြောရတယ် ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးမော်လ်ဒယ် လုပ်မယ်ဆို စကားပြော တောကျနေလို. မဖြစ်ဘူး ဟုတ်ပြီလား နောက် ဆောင်.လိုးလို. ပြောနော် ” ဟု အရှက်မရှိအောင် လိုင်းသွင်းပေးနေပါသည်၊ပုံ.ပုံ. ကတော. ဒယ်နီ ကို အထင်ကြီးနေတာမို. “ အင်. အင်. အဟင်. အာ. အို. ကိုရယ်ကောင်းလိုက်တာ အိ. အိ. အာ. ဆောင်.လိုး မရပ်နဲ. အင်. အဟင်. ဟာ. အာ. ကောင်းတယ်ကိုရယ် ကို လိုးတာ ကောင်းလိုက်တာ အို. အာ. ပုံ.လေးစောက်ပတ်ထဲ ပြည်.ကျပ်နေတာဘဲ ” ဟု၁၀ဒယ်နီ ကျေနပ်အောင် နောက်ပြီး ဒီလိုပြောမှ ခေတ်မှီမယ်ထင်ကာ မရှက်တော.ဘဲ ပြောရင်းအလိုးခံနေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. ကိုအနောက်မှ အတော်ကြာ လိုးနေပြီး ညောင်းလာတာမို. “ ကဲ ပုံ.လေးပုံစံပြောင်း လိုးကြရအောင် ” ဟုပြောပြီး ပုံ.ပုံ. စောက်ပတ်ထဲမှ သူ.လီးကြီးကိုထုတ်လိုက်ပါသည်၊ထို.နောက် ဘိုထိုင်အိမ်သာပေါ် အဖုံးပိတ် ထိုင်လိုက်ပြီး “ လာ ပုံ.လေး ကို.ပေါ် ခွထိုင်ပြီး အပေါ်က ဆောင်.ပေး ” ဟုပြောလိုက်ပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ ပေါ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ခွရင်း ဒယ်နီ၏ လီးကြီး ကိုကိုင်ကာ သူ.စောက်ပတ်ဝ တေ.ပြီး ထိုင်ချလိုက်ပါသည်၊ “ အာ. ဟာ. အို. ကိုရယ်ကို.လီး ကလည်း ကြီးလိုက်တာ အင်. ဟင်. ဟင်. အာ. အီး ကျွတ်ကျွတ် ” နှင်. ပုံ.ပုံ. မှာ ဒယ်နီပုခုံး ကိုင်ပြီး ဖင်ကြီးမြောက်ကြွမြောက်ကြွ လုပ်ကာ အလိုးခံနေပါသည်၊စာ ၀၂/၉ဒယ်နီ ကတော. အပေါ်က ဆောင်.ပေးနေသည်. ပုံ.ပုံ. ၏ နို.အစုံခါရမ်းနေတာကြည်.ကာမနေနိုင်တော.ဘဲ ပုံ.ပုံ. ၏ ကားစွင်.နေသည်. ဖင်ကြီး ကို ဖြဲကိုင်ကာ ဆောင်.ချပေးနေပါတော.သည်၊ “ ဗျွိဗျွိ ဘွပ်ဘွပ် ဘွတ်ပျွပ် ဈွပ်ဈွပ် ဗျွပ်ဗျွပ် အီး အား ဟာ. အို. ကိုရယ် ဟာ. ဟာ. အာ.အင်. အင်. အင်. ဟင်. အဟင်. အရမ်းကောင်းတာဘဲ အိ. အိ. အာ. ဟာ. ဟင်. အင်. အင်. ”ပုံ.ပုံ. လည်း ဏှာထန်လာကာ မရှက်တော.ဘဲ မြင်းစီးနေသည်. အလား ဖင်ကြီး ကို မြောက်ကြွမြောက်ကြွ လုပ်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင်.ချနေပါတော.သည်၊ဒယ်နီ ကတော. ပုံ.ပုံ. ၏ ဖင်ကြီးကို ဖြဲကိုင်ကာ ဆောင်.ချပေးရင်း ဏှာထန်ကာ ရှုံမဲ.ပြီးမျက်တောင်မှေးစင်း နေသည်. ပုံ.ပုံ.၏ မျက်နှာလေး ကို အရသာခံကြည်.ရင်း ကာမပန်းတိုင် ဆီချီတက်နေပါသည်၊ “ ဟင်. ဟင်. အင်. အာ. ဟာ. ကိုရယ် အို. အာ. ပုံ.လေး ပြီးတော.မယ် အင်.အင်. အာ. ကိုရော ဟင် ပုံ.လေး ကို လိုးလို. ကောင်းလား အိ. အိ. အာ. အင်. အင်. ” နှင်. ပုံ.ပုံ.လည်း ကာမစည်းစိမ် အထွတ်ထိပ်ရောက်ကာ ဖင်ကြီး ကို အစွမ်းကုန် မြောက်ကြွမြောက်ကြွလုပ် ပေးနေပါသည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. အပေးကောင်းတာကြောင်. “ ကောင်းတာပေါ. ပုံ.လေး စောက်ပတ်က လိုးလို. အရမ်းကောင်းတယ် မရပ်နဲ.တော. ကို လည်းပြီးတော.မယ် “ ဟုပြောရင်း အချက် ၄၀ခန်. ဆောင်.ရင်း နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူပြီးသွားတာမို. ဒယ်နီ က သုတ်ရည် များပန်းထုတ်ကာပုံ.ပုံ. ကလည်း စောက်ရည်များထွက်လာပြီး စောက်ခေါင်းထဲ မှာ ပြည်.လျှံကာ ပုံ.ပုံ. ဖင်ကြားသို.စီးကျလာပါတော.သည်၊ထို.နောက် နှစ်ယောက်သား ရေချိုးလိုက်ကာ နောက်တနေ.ချိန်းလိုက်ပြီး ထိုအခန်းမှလမ်းခွဲ ကာ ပြန်သွားကြပါတော.သည်။ပုံ.ပုံ. ၏ ရေချိုးခန်းထဲမှ လီးစုပ် သင်ခန်းစာ ပြီးပါပြီ ။ ။၁၁စာ ၀၃/၉ ပုံ.ပုံ. ၏ သင်ခန်းစာသစ်ဒယ်နီ မှာ သင်တန်းပိတ် သည်. တရက် ပုံ.ပုံ. အား သူ.အခန်းသို. ခေါ်သွားလိုက်သည်၊အခန်း ရောက်တော. ကာမထကြွဆေး ရောထားသည်. အအေးတခွက် တိုက်ကာ ဏှာကား ဖွင်.ပြထားပြီး “ ပုံလေး အဲဒီ ဏှာကား သေချာကြည်. ပြီးရင် အဲဒီထဲကလို ပုံ.လေး ကိုလိုးမှာ ဘယ်လိုပေးရ ခံရတယ် ဆိုတာ လေ.လာထား ” ဟုပြောပြီး ရေသွားချိုး လိုက်ပါသည်၊ပုံ.ပုံ. မှာ ကာမထကြွဆေး ကလည်း တန်ခိုးပြကာ ဏှာကားထဲမှ လိုးနေကြတာကြည်.ပြီး ကာမစိတ်များ ရွထလာပြီမို. ပင်တီကို ချွတ်လိုက်ပြီး တယောက်ထဲ စောက်ပတ်ကို နှိုက်ကာစောက်စေ.လေးကို ကလိ နေပါတော.သည်၊ ထိုအချိန်တွင် ဒယ်နီ က ရေချိုးပြီး လီးတန်းလန်းဖြင်.ထွက်လာပြီး ပုံ.ပုံ. ရှေ.ရပ်လိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. မှာ ဒယ်နီ ၏လီးကြီးကို ကြည်.ကာစောက်ပတ်ရွစိရွစိ ဖြစ်လာပြီး လီးကြီး ကို လှမ်းကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးလိုက်ရင်း လျှာဖျားလေးဖြင်. မထိတထိစာ ၀၃/၁၀လျှက်ပေးရင်း မော.ကြည်.လိုက်ပါသည်၊ ဒယ်နီ က “ ခုန ကြည်.ထားတဲ. ဏှာကားထဲကလိုစုပ်နော် ပုံ.လေး ” ဟုပြောရင်း ပုံ.ပုံ. ခေါင်းကိုကိုင်ကာ သူ.လီးကြီးကို ညှာင်.ပေးရင်း ပုံ.ပုံ. ၏ကားစွင်.လုံးဝိုင်းပြီး အနောက်သို. ပစ်ကော.နေသည်. ဖင်ကြီးကို အရသာခံကြည်.နေပါသည်၊ပုံ.ပုံ. လည်း ဒယ်နီ အလိုကျ လီးကြီးကိုအရင်းထိစုပ်ငုံပေးလိုက် လျှက်ဖျားလေးဖြင်.ဒစ်ပတ်လည်လျှက်ပေးလိုက် လီးတန်တလျှောက်လျှက်ပေးလိုက် တခါတခါ ဂွေးဥကို စုပ်ငုံပေးလိုက်နှင်. ဏှာကားထဲကအတိုင်း လုပ်ပေးပြုစုပေးနေပါတော.သည်၊ထို.နောက် ဒယ်နီ က “ ကဲ တော်ပြီ ပုံ.လေး ဖင်လိုးမယ် လေးဖက်ထောက်လိုက် ဆီလူးပေးမယ် ” ဟုပြောလိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. လည်း လီးစုပ်ရပ်လိုက်ပြီး ဆိုဖာပေါ် အလျှားလိုက်တက်ကာလေးဖက်ထောက်ပေးလိုက်ရင်း “ ပုံ.လေး ဖင် ကိုဖြေးဖြေးလုပ်နော် တခါမှခံဘူးတာမဟုတ်ဘူးကို. ကို ချစ်လွန်းလို.ပေးတာ ” ဟု လည်ပြန်လှည်. ကြည်.ရင်း ညုနေပါသည်၊မိုက်ကယ် ကူသအငသည ခမနော ဘူးကိုယူကာ လက်ဖြင်.ကော်ပြီး ပုံ.ပုံ. ဖင်စအိုဝတွင်လူး လိုက်ကာ လက်ညိုးဖြင်. ဖင်ပေါက်ထဲ ကလိပေးလိုက်ရာ ပုံ.ပုံ. မှာကာမရာဂအကြောများ ရွထ လာပြီး စအိုဝ ပွစိပွစိ နှင်. ပွင်.ဟလာကာ“ အို. ကိုရယ် ဟင်. ဟင်း. . ဟင်း . . အာ. တမျိုးကြီး ဘဲ ခံလို.ကောင်းလိုက်တာ လက်နှစ်ချောင်းပူးထည်.ပါလားအဟင်. ဟင်. ” ဟု တောင်းဆိုနေ တာမို. မိုက်ကယ် လည်း လက်နှစ်ချောင်း ပူးကာ ပုံ.ပုံ.၁၂ဖင်ပေါက်ကို ချဲ.ပေး ကလိပေး လိုက်ရင်း က “ဘာမှမပူနဲ. ပြီးရင် ကို.လီးကြီးတချောင်းလုံးထည်.မှာ အဲဒီတော.မှ မအော်နဲ. ဏှာဘူးမလေးဟင်း ဖင်ထောင်လိုးမှာ ” ဟုပြောလိုက်ပါသည်၊ထို.နောက် မိုက်ကယ် လည်း ပုံ.ပုံ. ဖင်ကြီးကို ခွကာ ဒစ်ကြီးကို ဖင်ဝတေ. ပြီးဖိသွင်းလိုက်ရာ “ အာ. ဟာ. ဟင်. ဟင်. အင်. နာတယ် ကိုရယ် အိ. အိ. အာ. ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ အီး အားဟာ. အဟင်. ဟင်. မရဘူးထင်တယ် ကိုရယ် ကျွတ်ကျွတ် နာလိုက်တာ အင်. အင်. ” နှင်. ပုံ.ပုံ.မှာ အခုမှ ဖင်ခံဘူးတာမို. အတော်ပင် အီဆိမ်.နေကာ ဒယ်နီ ၏ လီးကြီး သူ.ဖင်ခေါင်းထဲ မဆန်.မပြဲ ၀င်ထွက်နေသည်. အရသာ ကြိတ်မှိတ် ခံစားနေရင်း ညည်းညုနေပါသည်၊ဒယ်နီ ကတော. သူ.လီးကြီး ပုံ.ပုံ. ဖင်ထဲ တ၀က်ခန်.၀င်ပြီးနောက် ဆက်မသွင်းသေးဘဲပုံ.ပုံ. ခါးသေးသေးလေးကို ကိုင်ကာ အသာညှောင်.လိုးနေရင်းမှ “ ပုံ.လေး ကလည်း အစမို.ပါ တဖြေးဖြေး ခံနိုင်လာမှာပါ ကို အခု တ၀က်ပဲထည်.သေးတာ နဲနဲတော.အောင်.ခံကွာ နောက်တော.ကောင်းလာမှာပါ နောက်မှ ဖင်ဘဲခံချင်တယ်ဖြစ်သွားမယ် ” ဟုပြောလိုက်ပါသည်၊“ အိ. အိ. အာ. အီး ကျွတ်ကျွတ် အမေ. ဟင်. ဟင်. အင်. ပုံ.လေး က ကို.ကို ချစ်လွန်းလို. ဖင်ခံတာနော် အင်. အင်. နာလှပြီ အောင်.ခံနေရတာ အာ. အာ. ဟာ. အဟင်. ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆိုမှ ကိုရယ် အီး အား ဟာ. ဟင်. ဟင်. အင်. . . ” ပုံ.ပုံ. မှာ ဖင်အပျိုရည် အခုမှပျက်တာမို.မသက်သာလှပေ ဒယ်နီ ကတော. ပုံ.ပုံ. ၏ လုံးဝိုင်းကားစွင်.ပြီး ကော.နေသည်. ဖင်ကြီး ကိုကြည်.ရင်း ဖင်လိုးနေရသည်မှာ ရမက်ဆေးကြီး မှီဝဲနေရမို. အရသာတွေ.ကာ တဖြေးဖြေး တိုးကာလိုးသွင်းနေပါတော.သည်၊“ ဗျွိ ဗျွိ ဗျွပ် ဘွပ် ဘွပ် ဖျွပ် ဖပ် ဖပ် အီး အား ဟာ. အင်. အင်. ဟင်. ကိုရယ် အိ. အိ.အာ. ပုံ.လေး ကိုသနားပါအုံး အဟင်. ဟင်. အင်. အရမ်းကြမ်းတာဘဲ အင်. အင်. အာ. အဆုံးထိဝင်သွားပြီလား ဟင် ”ပုံ.ပုံ. မှာ အီဆိမ်.နေသော်လည်း ဏှာထန်လှသူမို. သူ.ဖင်ခေါင်းထဲ လီးကြီးစာ ၀၃/၁၁အကုန်မထည်.မှာ အလိုးမခံရမှာ စိုးရိမ်နေပါသည်၊ ဒယ်နီ က “ ဘာမှမပူနဲ. ပုံ.လေး ဖင်ထဲ လီးတဆုံးထည်.မှာ နဲနဲအောင်.ခံ ကောင်းလာလိမ်.မယ် ” ဟုပြောရင်း ပုံ.ပုံ. ၏ ခါးသေးသေးလေးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဆောင်.လိုးပါတော.သည်၊“ ဘွပ် ဘွပ် ဘွတ် ဗျွပ် ဗျွပ် ဗျွိ ဖျွပ် ဖပ် ဖပ် အင်. အင်. အင်. ဟင်. အာ. အား ကိုရယ်အို. ကျွတ် ကျွတ် အီး အား ရှီး သေပါပြီ အဟင်. ဟင်.ဟင်. အင်. နာတယ် အိ. အိ. အာ. ဟာ.ကိုရယ် ရက်စက်လိုက်တာ အာ. အာ. ဟာ. အင်. အင်. ” နှင်. ပုံ.ပုံ. မှာမျက်နှာရှုံမဲ.ကာ အံကြိတ်အလိုးခံရင်း ဖင်ကြီးကို ကောက်ကာ ကော.ကာ အနောက်သို. ပစ်ပေးထားပါသည်၊ပုံ.ပုံ. မှာ နာသော်အောင်.သော်လည်း ဖင်အလိုးခံရတာ အရသာတွေ.နေတာမို. ဖင်စအိုဝပွစိပွစိလုပ်ရင်း အပေါက်ဟလာပြီး အရည်လိုက်လာတာမို.ခံနိုင်ရည်ရှိလာကာဖင်ကြီးကိုအနောက်၁၃သို. အစွမ်းကုန် ပစ်ကော.ကာ ကောက်ပေးထားရင်း “ ဗျွိ ဗျွိ ဗျွပ် ဖျွပ် ဖျွပ် ဘွပ် အင်. အင်. ဟင်.အာ. ကိုရယ် ဆောင်. ဆောင်.လိုး အား ဟာ. ဟင်. ဟင်. ပုံ.လေး ခံနိုင်လာပြီ မညှာနဲ.တော. အိ.အိ. အာ. အင်. အင်. အင်. အဟင်. ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် ဟင်. ဟင်. ” နှင်. အသံထွက်လာပါတော.သည်၊ဒယ်နီ လည်း ပုံ.ပုံ. ဖင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ပတ်ကင်ဖွင်.ရတာမို. အရသာတွေ.ကာ မနားတမ်း ဆောင်.လိုးနေရင်း ပုံ.ပုံ. ပါးလေးကို မမှီတမှီနှင်. လှမ်းနမ်းလိုက်ပြီး လက်တဖက်က ပုံ.ပုံ.၏ နို.ဖောင်းဖောင်းလေးကို နယ်ပေးချေပေးလိုက်ကာ “ ပုံ.လေး ကို.ကို ချစ်တယ်မလား ကို အခုလို လိုးပေးတာ ကြိုက်တယ်မလား ဟင် ” ဟုမေးလိုက်ရာ “ အင်. ဟင်. ဟင်. အာ. ကိုရယ် ဟင်.ချစ်လို. ပုံ.လေးတကိုယ်လုံး ကို. စိတ်ကြိုက်ပေးထားတာဘဲ ခုလဲ ဖင်လိုးနေပြီးတော. ဟွန်. ကို.ကိုလဲချစ်တယ် ကို.လီးကြီး ကိုလဲကြိုက်ပါတယ် ရှင် ကဲကျေနပ်ပြီလား အာ. အာ. ဟာ. အဟင်.ဟင်. အင်. အင်. အို. ကိုရယ် ဖင်ခံလို. ကောင်းလိုက်တာ အင်. အင်. အင်. ” နှင်. ပြန်ဖြေရင်းကဖင်ကြီးကော.ကာ ဒယ်နီ စိတ်ကြိုက် အလိုးခံနေပါတော.သည်၊ဒယ်နီ လည်းကျေနပ်သွားကာ မနားတမ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း အချက် ၄၀-၅၀ ခန်.ဆောင်.လိုးရင်း ပုံ.ပုံ.ဖင်ခေါင်းထဲ သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ်ကာ ပြီးသွားတာမို. ပုံ.ပုံ. ပေါ်ထပ်ကာလီးကြီး စွပ်လျှက် မှိန်းနေလိုက်ပါသည်၊ ပုံ.ပုံ. လည်း စအိုဝ ပွစိပွစိလုပ်ပေးရင်း “ အာ. ကိုရယ်ကောင်းလိုက်တာ ပုံ.လေး ဖင်ထဲမှ ရွစိရွစိနဲ. ဖင်ခံရတာ ကြိုက်သွားပြီ ခိခိခိ . .” ဟု ညုလိုက်ပြီးဒယ်နီ လည်း လီးပြန်တောင်လာတာမို. ပုံ.ပုံ. ဖင်ကိုထပ်လိုးကာ စောက်ပတ်ကိုပါ တချီထပ်လိုးပေးလိုက်တာမို. ပုံ.ပုံ. လည်း အယားပြေသွားကာ ညနေစောင်းမှ ဒယ်နီ အခန်းမှပြန်လာခဲ.ပါတော.သည်။ပုံ.ပုံ. ၏ ဖင်အပျိုရည်ပျက် အတွေ.ကြုံပြီးပါပြီ ။ ။
ကျမဟာ ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်တယ်။ အသည်းထဲစွဲအောင်ကို ချစ်တာရှင့်..။ ကိုကိုက သိပ်ကြင်နာတတ်တာလေ။ဒါကြောင့်လည်း ကျမက အချစ်ပိုရတာပေါ့..။ ကိုကို့ကို ကျမက အမြဲတမ်း တမ်းတနေတာ။ သတိရနေတာ..။ လွမ်းနေတာ..။ကိုကိုနဲ့ မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေဆို ရင် ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်တွေးပြီး ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုလာရော..။ ကိုကိုနဲ့ချစ်ကြတာတွေကလည်း သိပ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာ..။ သိပ် အားရ ကျေနပ်စရာလည်း ကောင်းတယ်လေ..။ကျမက သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူနေတယ်။ သူကလည်း သူ့ရည်းစားဆီကို ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို သွားနေတာများတယ်။သောကြာနေ့ည ဆို သူက သူ့ရည်းစားဆီသွားပြီ။ တနင်္လာနေ့ကျမှ သူက ပြန်လာတာ..။ သူကလည်း သူ့ရည်းစားအိမ်မှာနှစ်ပါးသွား။ ကျမကလည်း ကျမ ကိုကိုနဲ့ နှစ်ပါးသွားကြတာလေ..။ သောကြာနေ့ညဆို ကျမရဲ့ ကိုကိုက ရောက်လာပြီ။နှစ်ယောက်သား ချစ်ဗျူဟာတွေ ခင်းကြတာများ.. အားရပါးရပေါ့။ ကျမရဲ့ အခန်းဖေါ်နဲ့ တနင်္လာနေ့ညဆိုရင် သူ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ကြတာများ ပျော်စရာကြီး။။သူကလည်း သူ့ရည်းစားက သူ့နို့လေးကို ဘယ်လို ဆို့လိုက်တာ..။ အခုထိ နို့ကလေးတွေမှာ ရဲနေတာပဲ..ဒီမှာကြည့်ပါဦးဆိုပြီး သူ့ နို့လေးနားမှာ သူ့ရည်းစား ကစ်စ် ထားလို့ ရဲရဲလေးတွေ ဖြစ်နေတာကို ပြတတ်တယ်။ ကျမကလည်းအားကျမခံပေါ့..။ အံမယ် ငါ့ကိုကိုက လည်း ငါ့ကို အချစ်ကြီးလိုက်တာ ဒီမှာတွေ့လားဆိုပြီး ပြန်ပြတာပေါ့။ တခါတလေများအဲဒီလို ပြကြရင်း တယောက်နို့လေး တယောက်စမ်းကြည့် ပွတ်သက်ရင်း စိတ်တွေ ဖေါက်ဖေါက်လာလို့.. တကယ်ပါ..သူ့စောက်ပတ်လေးကို ကျမက လျက်ပေးလိုက်.. ကျမ စောက်ပတ်လေးကို သူက လျက်လိုက်၊ ပွတ်လိုက်နဲ့.. တခါတလေများစောက်ရည်လေးများ ကျလာတဲ့အထိပဲ...။ထားပါတော့.. အဲဒီအကြောင်းကို နောက်မှ ပြောပြမယ်နော်။ အခုတော့ ကျမကိုကိုနဲ့ ကျမတို့အကြောင်းကိုပဲ ပြောမယ်။အင်း... ကျန်တာတွေတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ သူနဲ့ကျမတို့ ချစ်ပွဲဝင် ချစ်ရည်လူးကြတာတွေပဲ ပြောတော့မယ်။ရှင်တို့စိတ်ဝင်စားကြတာလဲ ဒါပဲ မ ဟုတ်လား။ ပြောပြမယ်။ နားထောင်နော်။သောကြာနေ့ညဆို ကိုကိုရောက်လာပြီ။ ကိုကိုလာတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် ကိုကိုက စားစရာတွေ ဝယ်လာကြတယ်။ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ကျမတို့တော့ ချက်ခြင်းမစားဖြစ်ပါဘူး။ ကိုကိုလာတာနဲ့ ကျမကို လှမ်းဖက်လိုက်တာပဲ..။'ချစ်လေးရေ.. လွမ်းလှပြီကွာ.. ' ဆိုပြီး ကျမပါးလေးတွေကိုနမ်းလိုက်၊ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းလိုက်။ နောက်တော့တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကျမရဲ့နားကလေးတွေကို လျှာကလေးနဲ့ လျက်ပေးရင်း ကျမရဲ့ ရင်သားဖေါင်းအိအိလေးတွေဆီ ကိုကိုလက်ကရောက်လာတာပဲ။ ကျမက လည်း ကိုကိုလာရင် လိုးကြမယ် ဆိုတာကြောင့် အမြဲတမ်း ရေမိုးချိုးပြီးတာနဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီပါးလေး ဝတ်ပြီး စောင့်နေတာလေ။ ဆိုတော့ အတွင်းခံတွေ ဘာတွေ ဘာမှ ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုရောက်လာပြီး ကျမကို ဖက်လိုက်ပြီး အဲဒီလို နမ်းပြီး နို့ကလေးတွေကို ပွတ်သက်ရင်း ဖတ်ထားတဲ့အခါများကိုကို့လီးကြီးက ဂျင်းဘောင်းဘီကြားက ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လှမ်းထိနေပြီလေ။ အဲဒီကတည်းကကျမကလည်း စိတ်တွေက ပါလာရော..။နောက် ကျမကို ဖတ်ပြီး ကိုကိုက အခန်းထဲကို အနမ်းမပျက် ရွေ့သွားပြီး ကျမရဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲလိုက်တယ်။နောက် ကျမ ရဲ့ အင်္ကျီကို လှန်တင်ပြီး ကျမရဲ့ အိစက်ဖေါင်ြး<ွကနေတဲ့ နို့ကလေးတွေကို အငမ်းမရ စို့ပါလေရော။ ခပ်ဖွဖွလေး စုတ်လိုက်၊ လျှာကလေးတွေ နဲ့ ရင်သားတလျှောက် တို့ကစားလိုက်၊ နို့သီးခေါင်းကလေးကို ငုံစို့လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်ရင် ကျမမှာ အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်လာရော။ ကိုကိုနဲ့ကျမက လိုးနေကျ လင်မယားတွေလို ဖြစ်နေတော့ ကျမကတော့ မရှက်တော့ပါဘူး။ ကိုကို့ဘောင်းဘီကြယ်သီးကို လှမ်းဖြုတ်ပြီး ကိုကို့ လီး နွေးနွေးလေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာပဲ။ ကိုကိုကလည်း သူ့ဘောင်းဘီကို လျှောချ ချွတ်လိုက်ပြီး ကျမချစ်တဲ့ သူ့လီးကြီးကို ပေးကိုင်တာပဲ။ သူကလည်း ကျမစောက်ပတ်လေးကို လှမ်းထိလိုက်တယ်။ နောက် စောက်မွှေးလေးတွေပေါ်မှာ မထိတထိ တို့ကစားရင်း ကျမကို ဝတ်လစ် စလစ် ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။ သူကလည်း အဲဒီအချိန်ဆို ဝတ်လစ်စလစ်ကြီးပဲလေ။ကျမက ကိုကို့လီးကို သိပ်ကြိုက်တာ။ အင်းလေ.. မိန်းကလေးဆိုတာ မပြောရင်သာ ရှိမယ်။ လီးဆိုရင်ကြိုက်တာချည်းပါပဲ။ ယောက်ျား တွေလည်း ဒီအတိုင်းနေမှာပဲနော်။ စောက်ပတ်လေးများဆို သိပ်လိုးချင်ကြမှာပဲ။ကျမကတော့ အရင်ဆုံး ကိုကို့လီးကို ပွတ်ကစားရင်း စိတ်တွေြ<ွကလာရင် ငုံချင် စုတ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာရောလေ။ ကိုကိုကလည်း ကျမရဲ့ ပေါင်တံလေးတွေပေါ် သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ပွတ်ကစားရင်း ကျမရဲ့ စောက်မွှေးလေးတွေကို တို့ထိလိုက်။ စောက်ပတ်လေးကို ခပ် ဖွဖွလေး အုပ်ရင်း ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့..။ သူ့လီးကြီးကလည်း တောင်နေတာပဲ..။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ကိုကိုက လှဲအိပ်ပြီး ကျမက သူ့အပေါ် ခွထိုင်ပြီး သူ့လီးကို လှမ်းစုတ်လိုက်တာပဲ။ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် ဖေါင်း ဖေါင်းလေးတွေကလည်း ကိုကို့မျက်နှာနားရောက်နေပြီလေ..။ ''ချစ်ရယ်.. ချစ် စောက်ပတ်လေးက သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ဒီစောက်ပတ်လေးကို မှုတ်ချင်လှပြီကွ..' ဆိုပြီး ကျမစောက်ပတ်ကလေး တွေကို သူ့လျှာလေးနဲ့ လှမ်းလျက်ပါလေရော။ လျှာနုနုလေးတွေနဲ့ ကျမ စောက်ပတ် အနားလေးတွေတလျှောက် မွှေကစားလိုက်ရင် အမလေး အသည်းထဲ အေးကနဲ အေးကနဲပေါ့ရှင်။ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။နောက် ကိုကိုက သူ့လက်လေး ၂ ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် အနားလေးတွေကို ဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို လျှာကလေးနဲ့လှမ်းလှမ်း ထိုးလိုက်ရင် အသည်းထဲ အေးကနဲကို ဖြစ်သွားပြီး ကျမမှာ မြောက်တက်သွားသလား ထင်ရတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာကျမကလည်း ကိုကိုရဲ့ လီးကြီးကို ပွတ်ပေးရင်း လီးကြီးရဲ့ အရည်ပြားလေးကို စွဲချပြီး ပြောင်ပြီး မာနေတဲ့ ဒစ်ကြီးကိုလျှာကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး လိုက်တို့ ကစားလိုက် တယ်။ပြီးတော့ အဲဒီ လီးကြီးကို ဆုပ်နယ်ပြီး အထက်အောက် ကစားပေးရတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ။ သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ထားရင်း အသည်းယားလာတာမို့ လက်တဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖိဆုပ်ပြီး အောက်ကို ဆွဲချလိုက် အထက်ကိုပြန်တင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။ လီးထိပ် အသားနုနု နီတာရဲလေးကိုတော့ ကျမမှာ ငုံထားရတာ တကယ့်အရသာပါပဲ။သူ့လီးကြီးတောင်နေတာကို ကျမက လျာကလေးနဲ့ ငုံ လျက်ပေးလိုက်ရင် သူလည်း''အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ.. ချစ်က သိပ်ကောင်းတာပဲ.. အဲဒီလို ကိုကို့လီးကို မှုတ်ပေးတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ..အား.'' ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပဲလေ။ ပြောလည်းပြောရင်း ကျမစောက်ပတ်ကိုလည်း မှုတ်ရင်းပေါ့။ကျမကလည်း သူ အဲဒီလိုပြောပြီး ကျမစောက်ပတ်လေးထဲ လက်ကလေးသွင်းပြီး စောက်စိကို လျှာကလေးနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး များ ကစားလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းသွားလို့.''အို.. အား.. အား... ကောင်းလိုက်တာ.. ကိုကိုရယ်.. အမလေး.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးက ကောင်းလားဟင်''လို့ ပြန်မေးမိရောကိုကိုကလည်း..''ချစ်ရယ်.. အ၇မ်းကောင်းတာပဲ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ် အနားလေးတွေကလည်း လှလိုက်တာ.. အထဲကအသားလေးတွေကလည်း ပန်းနုရောင်လေးတွေ.. နုဖတ်ပြီး စောက်ရေကျဲကလေးတွေနဲ့ လျှက်လိုက်ရတာ အရသာ သိပ်ရှိတာပဲ..အကြာကြီး လျက်ပါရစေဦးနော်.. ''''အို.. ကိုကိုကလဲ... '''''လျက်လို့ မဝလို့ပါကွာ.. ချစ်စောက်ပတ်လေးက သိပ်ကောင်းတယ်''''ပိုပြီ.. သူများစောက်ပတ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဟာကို''''အို.. မတူဘူးကွ.. ကိုကို လိုးခဲ့ဖူး၊ မှုတ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ စောက်ပတ်တွေထဲမှာ ချစ်ရဲ့စောက်ပတ်လေးကိုလျှက်ပေးရတာလည်း သိပ် ကောင်းတယ်။ လိုးရတာလည်း အရမ်းကို ကောင်းတာ..'' တဲ့လေတကယ်တော့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအတွေမျိုးရှိတာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။ ကြားရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲလေ။ဒါကြောင့် ကျမ ကလည်း အလိုက်သတိနဲ့..''ချစ်ကတော့ ကိုကို့လီးကိုပဲ အလိုးခံဖူးတာနော်။ ကိုကို့လီးနဲ့ အလိုးခံရရင် အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ...'' လို့ပြန်ပြောလိုက်တာပဲ။ တကယ်တော့ တခြား ဘယ်လောက်ပဲ အလိုးခံခဲ့ဖူးဖူး လက်ရှိလိုးပေးမယ့်သူ စိတ်ချမ်းသာဖို့ပြောရတာပဲလေ။ ဒါမှ ၂ ယောက်လုံး ပိုပြီး ကာမ အရသာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့က အပြန်အလှန် မှုတ်ပေးကြပြီးရင် ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ပတ်တို့ လိုးချင်စိတ်တွေတဖွားဖွားဖြစ်လာရောလေ။အဲဒီအခါ ကိုကို ကျမအပေါ်ကို တက်လိုက်ရော။ ကျမကလည်း အလိုက်သင့် ပေါင်ကလေးကို ဖြဲပေးတာပေါ့။ ကိုကိုလိုးချင်စိတ်တွေ ပိုဖြစ်လာအောင်လည်း..''ကိုကို.. လိုးတော့ကွာ... ခံချင်လာပြီ..''''အင်း.. လိုးမယ်နော်.. ချစ်.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲကို ကိုကို့လီးကြီးထည့်လိုက်မယ်နော်..''''အင်း.. ထည့်လိုက်နော်.. ကိုကို့လီးကြီးက တောင်နေတာပဲကွာ..'''အင်းလေ.. အဲဒါ ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို အရမ်းလိုးချင်လို့ပေါ့..''''ကိုကို့လီးကြီးက သိပ်ကောင်းတာပဲ.. ချစ်တော့ အရမ်းစွဲနေပြီကွာ..''''ကိုကိုလည်း အတူတူပဲကွ.. ချစ်စောက်ပတ်လေးထဲကို ကိုကိုလီးကြီး ထည့်လိုက်မယ်နော်''''အင်း.. ထည့်လိုက်.. အမလေး..''အား.. ရှီး.. ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်.. အထဲကို ဝင်သွားပြီ''''အင်း.. ကိုကို့လီးထိပ်ကြီးက ချစ်ရဲ့စောက်ပတ်ထဲ ရောက်နေပြီကွ..''''အို.. အား.. ကိုကို့လီးကြီးကလည်း အပြင်ကထက် ပိုပြီး ကြီးလာသလိုပဲ''''အပြင်ကထက်..''''အင်းလေ... ချစ်စောက်ပတ်ထဲမှာ ကိုကို့လီးကြီးဝင်နေတာ တင်းကျပ်နေတာပဲကွာ..''''ချစ် .. နည်းနည်း ထပ်သွင်းလိုက်ပြီကွာ...''''အိုး... အမလေး.. အား.. ကောင်းလိုက်တာ.. ထည့်ထည့်. .. အဆုံးထိသာ ထည့်လိုက်ကွာ.. အ၇မ်းကောင်းတယ်အမလေး..''''အား.... ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ... စပြီး လိုးတော့မယ်နော်..''''အင်း.. လိုး.. ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လိုးနော်...''''အင်း.... အား... ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ..'''အဲဒီလိုတွေ ပြောပြီး ကိုကိုက ကျမ စောက်ပတ်ကို စလိုးတော့တာပဲ။ သိပ်ကောင်းတယ်။ တကယ်ပဲ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ စည်းစိမ် ဘယ်ရှိမလဲနော်။ကိုကိုက လိုးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပိုမြန်လာတဲ့အခါ ကျမလည်း စောက်ပက်လေးထဲ သူ့လီးကြီး များများဝင်အောင်ပေါင်ကို ကျယ်ကျယ်လေး ကားပေးတာပေါ့။ သူကလည်း အပေါ်ကနေ စောင့်လိုးနေတာ အားမရလို့လားမသိဘူး။ ကျမရဲ့ နို့နှစ်ဖက်ကိုလည်း လှမ်းကိုင်ပြီး စောင့်စောင့်လိုးတော့တာပဲ။ အားရပါးရကို လိုးတာ။. ကျမလည်း ခံလို့ကောင်းလိုက်တာပြော မနေနဲ့..။''အား.. အရမ်းလိုးချင်တယ်ကွာ။ အရမ်းလိုးနေတယ်နော်''''အင်း. လိုး.. လိုး.. ဒီစောက်ပတ်လေးက ကိုကို့အတွက်နော်..။ တသက်လုံး လိုးမှာလား..''''လိုးမှာပေါ့ ချစ်ရ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရတာ ဘယ်တော့မှ အား၇တယ်မရှိဘူး..''''ကဲ.. ဒါဆို အားရပါးရလိုးနော်''''လိုးမယ်.. လိုးမယ်.. ဒီတချီပြီးသွားရင် နောက်တချီ လိုးမယ်။နောက်တချီ ပြီးရင် နောက်တချီနော်..''''ဘာလုပ်မှာလဲ ကိုကိုရဲ့..''''လိုးမှာလေ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်ကို ကိုကို့ရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးမယ်ကွာ..''''အား.. လိုး ကိုကို လိုးသာလိုး. ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ လိုးလို့ကတော့ ချစ်က အမြဲတမ်း ခံမယ်နော်။ ကိုကိုစိတ်တိုင်းကျလိုးနော်..''''အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ.. '' လို့ ပြောရင်း ကျမရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းရင်း သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ကို တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ လိုးပါလေရော..။ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာရှင်..။နောက်တော်တော်ကြာတော့ သူလည်း မောလာတာပေါ့။ အဲဒီအခါ''ကိုကို မောနေပြီလား။ ချစ် အပေါ်က တက်စောင့်ပေးမယ်နော်..''''အင်း.. အဲဒီလို အလိုက်သိတတ်လွန်းလို့ ချစ်ကို ပိုပြီးချစ်ရတာ..''လို့ သူက ပြောရင်း ကျမပါးလေးကို နမ်း၊ နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းရင်း ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ ကျမလည်း သူ့အပေါ် ခွတက်လိုက်ပြီး အပေါ်ကို ထောင်နေတဲ့ သူ့လီးတောင်တောင်ကြီးကို လှမ်းကိုင်ပြီးကျမရဲ့ စောက်ပတ်နဲ့တေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ်။ သူ့လီးကြီးက ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို စွပ်ကနဲ ဝင်သွားပါလေရော..။'အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ..'''ကိုကို.. ချစ်လိုးတော့မယ်နော်..''''လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး.. အပေါ်က တအားသာ စောင့်နော်..''''အင်း. စောင့်မယ်... ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုကိုလီးကြီးပေါ်ကို တအား စောင့်လိုးမယ်ကွာ..''''အင်း.. လိုးသာလိုး ချစ်..''ဆိုပြီး ကျမလည်း သူ့လီးကြီးအပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီး တစွပ်စွပ်နဲ့ စောင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း အောက်မှာ ဇိမ်တွေ့နေတဲ့အပြင် ကျမရဲ့ နို့ကလေးတွေ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်နေတာကို လှမ်းလှမ်းဆွဲလိုက်သေးတယ်။ ကျမလည်း စိတ်ရှိလက်ရှိ အားရပါးရ သူ့လီးကြီးပေါ် စောင့်စောင့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်တယ်။သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ကျမလည်း စောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ စောင့်လိုက်တာ အဲယားကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ ချွေးပြန်တဲ့အထိပဲ။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျမလည်း မောပြီး ကိုကို့အပေါ် လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ကိုကိုကလည်း ကျမကို လှမ်းဖက်ထားပြီး ဘေးကိုစောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့''နောက်ကနေ လိုးဦးမယ်ချစ်ရာ.. ဖင်ကုန်းပေးထားနော်..''''အင်း.. ကိုကို့သဘောနော်..''ဆိုပြီး ကျမလည်း လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း သူ့လီးနီတျာတျာကြီးကို ကျမစောက်ပုတ်ထဲ ထိုးလိုက်တာ လျောကနဲ ဝင်သွားတာပါပဲ။ သူက နောက်ကနေ ကျမ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရင်း နို့ကလေးတွေကို လှမ်းဆွဲထားတယ်။ ပြီးတော့ သူလည်း အကြာကြီး စောင့်စောင့်ပြီး လိုးနေလိုက်တာများ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းကို မသိဘူး။ကောင်းလွန်းလို့ တော်တော်ကြာကြာလိုးပြီးပြန်တော့ ၂ ယောက်လုံး မောနေပြီ။ လိုးလို့ကလည်း ကောင်းတုန်းလေ။ဒီတော့မှ တခါ ကျမက လှဲအ်ိပ်ပြီး သူက ကျမအပေါ်တက်ပြီး ကျမရဲ့ ခြေထောက်လေး ၂ ချောင်းကို ဖြဲကားလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးက ပြဲပြီး ဖေါင်းနေတော့တာပေါ့။အကြာကြီး လိုးထားတော့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် အနားသားလေးတွေကလည်း ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေပြီး ကိုကို့လီးတောင်တောင်ကြီးနဲ့ လိုးပါတော့လို့ ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်နေတယ်လေ။ကိုကိုကလည်း ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ သူ့လီးကြီးနဲ့ စွပ်ကနဲ ထိုးလိုက်တယ်။ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှာပြည့်တင်းပြီး ကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်ကို ကောင်းတာပါ။ အ၇မ်းခံလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ့။ကိုကိုကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲ သူ့လီးကြီးဝင်တာနဲ့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ တခါတည်း စောင့်စောင့်ပြီးတော့ကိုလိုးပါတော့တယ်။ သူ့လီးကြီးကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့..။ တဖြည်းဖြည်း ကျမလည်း ခံရတာကောင်းလွန်းလို့ ပြီးချင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်.''အား.. ကိုကိုရယ်.. ကောင်းလိုက်တာ.. လိုးလိုး..နာနာလိုးနော်''''အင်း လိုးမယ် လိုးမယ်.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တအားလိုးတော့မယ်နော်''''လိုး ကိုကိုရေ.. ချစ်တော့ အ၇မ်းကောင်းနေပြီ..''''အင်း.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တအားစောင့်ပြီးလိုးပြီကွာ.''''လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး..''''လိုးနေပြီနော်။ တအားလိုးနေပြီ.. ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ အရမ်းကို လိုးနေပြီနော်..''''အား.. အား.. ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်.. အရမ်းလိုးနော်..''အင်း. လိုးတယ်.. အရမ်းလိုးတယ်.. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ်..'' ဆိုပြီး သူက တအားတအားကို စောင့်စောင့်ပြီးလိုးလိုက်တာ ကျမမှာ ပြီးချင်လာတာမို့.. ကိုကို့ကို..''အား.. ကိုကို.. မြန်မြန်လိုး.. လိုး.. လိုး.. '''အင်း.. လိုးမယ်.. တအားစောင့်လိုးမယ်..''အား'''အား.. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ်.. ပြီးတော့မယ်နော်..''''အင်း ချစ်လဲ ပြီးတော့မယ်.. လိုးလိုး... '' ဆိုပြီး ကျမလည်းအော်လိုက်မိတော့တယ်။ကိုကိုကလည်း အတင်းစောင့်စောင့်ပြီးလိုးလိုက်တာ ကျမလည်း အရမ်းကောင်းလို့ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ကျမစောက်ပတ်ထဲက စောက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်ပါတော့တယ်။ ကိုကိုကလည်း တဖြန်းဖြန်းနဲ့ သူ့ထီးထဲက သုတ်ရေတွေ အများကြီးထွက်လာပြီး ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုကို့လီးတို့ လိုးတာ ပြီးသွားပါတော့တယ်။အမလေး လိုးလို့လည်း ပြီးရော ကျမတို့မှာ ဖတ်ဖတ်ကို မောသွားတော့တာပေါ့။ဒါနဲ့ ရေပြန်ချိုးကြ၊ ကိုကိုဝယ်လာတဲ့ စားသောက်စရာတွေကို စားလိုက်ကြနဲ့ အမောပြေတော့ နောက်တချီ၊ တရေးအိပ်ပြီး နောက်တချီ၊ မိုးလင်းတော့ နောက်တချီ.. လိုးလိုက်ကြ စားလိုက်ကြ အိပ်လိုက်ကြနဲ့ တနင်္လာနေ့မနက်ကျမှပဲ ကျမတို့ရဲ့ အချစ်ပြိုင်ပွဲကြီး အဆုံးသတ်ပါတော့တယ်။ညကျရင် ပြန်လာမယ့်အခန်းဖေါ် သူငယ်ချင်းနဲ့ ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်ပြော၊ သူကလည်း သူ့ရဲ့ အလိုးခံခဲ့တာတွေပြန်ပြောကြနဲ့ စားမြုံ့ပြန်ကြရဦးမယ်လေ...
အိုး.... ကောင်းလိုက်တာ မိုးသဲရယ်။ နင့်စောက်ဖုတ်က လီးကို တအားညှတ်ထားလိုက်တာက ဘယ်လို့ အရသာမှန်းမိသိဘူး။ စောင့်ဖုပ်လေးကို လက်ခလယ်နဲ့အသာလေးပွတ်သတ်ပေးလိုက်တယ်။ မိုးသက်လေးက နုတ်ခမ်းလေးတအားကိုက်ပြီး အရာသာတမျိုးခံစားကြည့်နေသည်မှာ တကယ့် ကာမကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ထားသူဖြစ်မယ်ထင်ရတယ်။ မင်းအခုထက်ထီ မမှတ်သေးဘူးလား။ နောက်မှ ဆက်ရေးမယ်နော်
သုံးရက်မျှကြာသွားသည်ဟုထင်ရပါသည်။မိန်းမသားတို့၏အဓမ္မထုံးစံအတိုင်း၊ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ရာသီလာမှုသည်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ကြည်ကြည်မိုးသည်နံနက်စောစောမှာပင်ခေါင်းလျှော်ရေချိုးသန့်စင်စေပြီးအိပ်ယာထက်ဝယ်ကက်ဆက်ဖွင့်စေပြီး ငြိမ့်နေလျှက်ရှိပါသည်။သို့သော်၊ အထီးကျန်တယောက်ထဲနေရခြင်းသည်ပျင်းရိညည်းငွေ့လာသည်မို့ပထမဦးဆုံးသတိရမိလိုက်သည်ကချစ်သူနန်းမောင်မောင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ယခုအချိန်တွင်နန်းမောင်မောင်သည်အိမ်တွင်ရှိပါလိမ်မည်။သူ့ကိုဖုန်းဆက်၍ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘို့ချိန်းဆိုလိုက်ရမလား၊ဒါမှမဟုတ်စကော့ဈေးထဲသို့လိုအပ်နေသည့်ပစ္စည်းများကိုလျှောက်ဝယ်ရင်းပျော်ပစ်လိုက်မည်ကြည်နူးပစ်လိုက်မည်ဟုတွေးတောရင်းက၊ တယ်လီဖုန်းကိုကိုင်မလိုက်ပါသည်။်ဟဲလို၊ ကိုနန်းမောင်မောင်ရှိပါသလားရှင်၊အော် ခုပြောနေတာအန်တီမေလားဟင်၊ဘယ်သွားမယ်လို့ပြောသွားသလဲ၊ ကြည်ကြည်ဖုန်းဆက်ကြောင်းပြောပေးပါနော်၊ အဲ အဲ ဒါပါဘဲ ။ကြည်ကြည်မိုးသည်ချစ်သူနန်းမောင်မောင်နှင့်ချိန်းဆိုပြီးနေရာအနှံ့အပြားလျှောက်လည်ပစ်လိုက်မည်ဟူသောအပျော်တွေးများသည်လေထဲမှာပင်လွင့်ပြယ်သွားရပါတော့သည်။ဒါပေမဲ့တကိုယ်တည်းနေရသည်မှာပျင်းရိနေသည့်အတွက်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမြမြအေးကိုဝင်ခေါ်ကာစကော့ဈေးသို့သွားရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ပင်ကားကိုမောင်းနှင်ကာထွက်လာပါတော့သည်။ကြည်ကြည်မိုးသည်မြမြအေး၏အိမ်သို့ရောက်ရှိသောအခါတွင်ကားပေါ်မှမဆင်းတော့ဘဲဟွန်းတီး၍ခေါ်လိုက်ပါသည်။သိုသော်လူရိပ်လူယောင်မမြင်ရပါ၊အိမ်တံခါးသော့ခတ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတော့သည်။ကြည်ကြည်မိုးသည်အိမ်မှစ၍ထွက်လာကထဲကဘာမှအဆင်မပြေပါ၊ပထမဦးဆုံးနန်းမောင်မောင်ဆီဖုန်းဆက်တုန်းကလဲမရှိ၊ယခုလည်းမြမြအေး၏အိမ်ကိုလာခေါ်တော့လဲမရှိနှင့်ကြည်ကြည်၏စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုစပြုနေပါသည်။ဟိုတွေးဒီတွေးနှင့်ကားလမ်းမတည့်ရာလမ်းတလျှောက်ကိုလျှောက်မောင်းနေစဉ်မှာပင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းမျှကချစ်သူနန်းမောင်မောင်၏လက်တည့်စမ်းမှု့ကြောင့်သဘာဝမဟုတ်သည့်ဖင်ဝ(ဗ္ဒဗူ)ကိုလိုးဆောင့်မှု့ကြောင့်ကြိမ်းနေသည့်ဒဏ်ရာကငုပ်နေရာမှပြန်ပေါ်လာသည်ဟုထင်နေရသလိုလို၊စိတ်ထဲတွင်လည်းစနိုးစနောင့်ကြီးဖြစ်နေသလိုလို၊နောက်ပြီးတက်မက်မောစွာကောင်းလွန်းလှသောအန်ကယ်ကျော်၏တောင့်တင်းသောကိုယ်ခန္ဓာအား၎င်း၊ကြီးမားတုတ်ခိုင်ရှည်လျားသောအန်ကယ်ကျော်၏လီးကြီးကို၎င်း၊ရာဂ၏စိတ်နိုးကြွမှုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုင်ခဲ့သည့်အန်ကယ်ကျော်အားတသသစွဲမက်နေရင်းရှိခဲ့စေပြီးနောက်တကြိမ်တဖန်ပြန်လည်၍ထိတွေ့မှုများရှိနေစေချင်သည့်ဆန္ဒရမက်များကတဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်မို့၊ရာသီလာသည့်ကိစ္စများပြီးဆုံးခဲ့လျှင်နောက်တခေါက်ပြန်လည်၍ချိန်းဆိုလိုက်သောအန်ကယ်ကျော်၏စကားများကိုပြန်လည်၍ကြားယောင်လာမိပါတော့သည်။ဤသို့ဖြင့်တခါမျှရောက်ဘူးခဲ့သောအန်ကယ်ကျော်တိုက်ဆီသို့ကားဦးပြန်၍လှည့်ခဲ့ပါတော့သည်။စိတ်ထဲမှလည်းမိန်းကလေးတန်မဲ့နှင့်မည်သိုမျှမတော်စပ်ခဲ့သောယောက်ျားထံအဖေါ်တယောက်မှမပါဘဲမိမိတဦးတည်းသွားရမည်ကိုရှက်ရွံ့၍နေပါသော်လည်းလက်တွေ့တရပ်မှာမူအန်ကယ်ကျော်ခြံဝင်းပေါက်ဝသို့ပင်ကားကရောက်ရှိနေပါတော့သည်။ပေါ်တီကိုအောက်သို့0x150ှင်သာစွာကားရပ်စေပြီးလျှင်စေထားသောသံတခါးကိုဆွဲဖွင့်၍တိုက်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပါတော့သည်။တိုက်တွင်းရှိဧည့်ခန်းစားပွဲတွင်ဝင်ထိုင်ပြီးမိမိရောက်ရှိနေကြောင်းအန်ကယ်ကျော်အားအသံပြုမည်ဟုကြံရွယ်စဉ်မှာပင်အခန်းတွင်း၌မသဲကွဲသောဖိုမအသံများထွက်ပေါ်လာသံကိုကြားလိုက်သောအခါ၊အန်ကယ်ကျော်ထံတွင်လာပြသည့်လူနာရောက်ရှိနေကြောင်းထင်မှတ်၍အသာပြန်၍ညိမ်နေလျှက်စားပွဲပေါ်တွင်အသင့်တွေ့ရှိနေသည့်မဂ္ကဇင်းတအုပ်ကိုဆွဲယူ၍လှန်လှောကြည့်ရှုနေမိပါသည်။ကြည်ကြည်မိုးသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်လောက်ကယခုလိုအချိန်ပိုင်းမျိုးကိုပြန်လည်တသသစဉ်းစားနေရင်းကရင်လှိုက်မောလှိုက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကတုန်ကရင်ဖြစ်နေရပါသည်။ထို့ပြင်အခန်းတွင်းမှတခစ်ခစ်တဟဲဟဲဖြင့်ရယ်မောသံများကပျံ့လွင်၍လာပါတော့သည်၊အကယ်၍များ၊အခန်းတွင်း၌ကား၊အခန်းနံရံကိုဖေါက်၍မျက်စေ့တဆုံးမြင်စွမ်းနိုင်အံ့ရှိခဲ့သော်အန်ကယ်ကျော်နှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမြမြအေးတို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။အခန်းအတွင်းရှိမနုဿလူသားနှစ်ဦး၏အဖြစ်သည်ကား၊ တူမတော်သည်ဟုပြောဆိုထားသည့်မြမြအေးသည်ထူထဲခိုင်ခန့်လှသည့်ဖဲမွေ့ယာပြင်ဝယ်အ၀တ်အစားဟူ၍တမျှင်တမြူမျှမကပ်စေဘဲမိမွေးတိုင်းသဖွယ်၊၀တ်လစ်စလစ်ဖြင့်မိန်းမူး၍နေပါသည်။ထို့ပြင်အန်ကယ်အဖြစ်ပါဝင်လှုပ်ရှုားကပြအသုံးတော်ခံနေတေသာအန်ကယ်ကျော်အဖြစ်ကိုမူယခုလက်ရှိအမြင်နှင့်တော့တခြားစီဖြစ်နေရပါသည်။အန်ကယ်ကျော်သည်မြမြအေးကဲ့သို့ဝတ်လစ်စလစ်နှင့်ဖြစ်နေပါသည်။ထို့ပြင်တူမတော်သည်ဟုပြောထားသည့်မြမြအေး၏ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ခွထားပြီး၊သူမ၏ခြေနှစ်ဘက်ကိုသူ၏ပုခုံးပေါ်သို့မတင်ထားပြီးအင်တိုက်အားတိုက်လိုးဆောင့်နေပါတော့သည်။နွားပျိုသန်လှ၊နွားအိုပေါင်ကျိုးသလောက်၊ပင်ရှိပါသေးသည်ဟုစာဆိုနှင့်အညီအန်ကယ်ကျော်သည်မမောပန်းစွာဖြင့်အားရပါးရကြီးကာမ၏အရသာစည်းစိမ်ကိုမက်မက်မောမောခံစားနေပါသည်။ထိုနည်းတူအောက်မှနေ၍ဖြဲကားပြီးဖင်တခုလုံးမြောက်တက်နေအောင်အလိုးခံနေရသောမြမြအေးသည်လည်း၊လိုးဆောင့်မှု့၏ဒဏ်ကိုမမှုသည်လား၊ တဟဲဟဲတခစ်ခစ်ဖြင့်ရယ်မောနေသေးသည့်အပြင်ဆောင့်လိုးချက်နှင့်အတူစီးချက်ဝါးချက်တူညီစွာဖြင့်အားရတင်တိမ်မှုသဏ္ဘန်နှင့်မျက်လုံးလေးကိုမှေးစင်းကာပြုံးယောင်ပြုံးတုံ့ဖြင်ကျေနပ်မှုရှိနေပါ တော့သည်။အန်ကယ်ကျော်၏လီးကြီးသည်ရှည်လည်းရှည်၏ကြီးလည်းကြီး၏နောက်ပြီးအားမာန်အပြည့်နှင့်သန်မာလှသောအန်ကယ်ကျော်သည်မြမြအေး၏စောက်ဖုတ်ဝတွင်းသို့လီးကြီးဝင်ရောက်သွားလေတိုင်း၊ပြန်ဆွဲနှုတ်လေတိုင်းသည်ပြင်းထန်ပြီးကြမ်းတမ်းလှသောကြောင့်အခန်းငယ်တခုအတွင်း၌ပင်မုန်တိုင်းတခုကျရောက်နေသဖွယ်ရှိသည်ဟုပင်ထင်မှတ်ရလေတော့သည်။ထို့နောက်အန်ကယ်ကျော်နှင့်မြမြအေးတို့သည်ကာမ၏အရသာကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်တင်းတိမ်ကျေနပ်မှုရှိသွားသည့်အလား၊ထိန်းသိမ်းထားသောသူတ်ရည်များကိုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပစ်လွှတ်လိုက်စေပြီး၊မြမြအေး၏ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ခြေပစ်လက်ပစ်ကျသွားပါတော့သည်။ဤသို့ဖြင့်အချိန်အနည်းငယ်မျှကြာသော်အန်ကယ်ကျော်နှင့်မြမြအေးတို့သည်ဘေးနားတွင်ပုံထားကြသောအ၀တ်အစားများကိုဝတ်ဆင်စေလျှက်အခန်းအပြင်ဘက်သို့တူယှဉ်တွဲ၍ထွက်လာပါတော့သည်။ကြည်ကြည်မိုးသည်ခြေသံကြား၍စာအုပ်ဖတ်နေရာမှမျက်နှာမောကြည့်မိသောအခါတွင်အန်ကယ်ကျော်ကမြမြအေးကိုပုခုံးဖက်လျှက်ပိုက်ထွေးယုယလာသည်ကိုမြင်ရသောအခါအံ့အားသင့်၍သွားပါ တော့သည်။ဟယ်၊ ကြည့်စမ်းညည်းအိမ်တောင်ရောက်ခဲ့သေးတယ်၊အိမ်တံခါးပိတ်ထားတာတွေ့ရသေးတယ်ခုတော့အန်ကယ်ဆီကိုရောက်နေတာကိုး။မြမြအေးသည်ပုံးပေါ်သို့ဖက်တွယ်ထားသောအန်ကယ်ကျော်၏လက်များကိုဖယ်ချစေပြီးအမူအယာပျက်နေလျှက်ရှိသောမျက်နှာကိုပြန်လည်၍ပြင်လိုက်စေပါသည်။ဟာ သူငယ်ချင်းပါလားကိုယ်ဒီမှာရှိကြောင်းသိလိုလာတာလားကွ၊ကိုယ်တို့အိမ်ကဧည့်သည်တွေရောက်လာလို့မြို့ပေါ်ကိုလျှောက်လည်ဘို့တအိမ်လုံးသွားကြတာအိမ်မှာနေရတာပျင်းတာနဲ့အန်ကယ်ကျော်ဆီကိုလာလည်တာကွ၊မင်းကော ဟိုကိစ္စဘဲမဟုတ်လား ဟု ပြောဆိုရင်းကြည်ကြည်းမိုးထိုင်နေသည့်ဆက်တီးပေါ်သို့ကပ်ထိုင်လိုက်ပါသည်။၀ါရင့်လှသူအန်ကယ်ကျော်မှာတော့မျက်နှာမပျက်လေသည့်အပြင်ဟန်ဆောင်ကောင်းလှသူပီပီ၊ကလေးငယ်တဦး၏ပါးစပ်နားသို့အစာတခုရောက်ရှိလာသည့်ပမာ၊ သဘောကျ နေစေပြီး၊ တဟဲဟဲတဟီးဟီးဖြင့်ရယ်မောနေပါတော့သည်။ထို့နောက်အန်ကယ်ကျော်သည်မိန်မသားနှစ်ဦးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်စေရန်အတွက်ထွက်လာသည်အခန်းထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေပြီး၊ရေခဲသေတ္တာထဲမှနွားနို့နှင့်ကြက်ဥနှစ်လုံးကိုသမအောင်ရောနှောစေ၍ကုန်ခမ်းသွားသောအင်အားများအတွက်တဖန်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးတောင့်တင်းစေရန်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေပါတော့သည်။ထို့ပြင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းမျှလောက်ကတောင့်တင်းဖြိုးလှသောကြည်ကြည်မိုး၏ရမ္မက်သွေးများကို၀၀လင်းလင်းစားသုံးရန်အတွက်အသင့်ပြုပြင်စေခဲပြီးမှမိန်းမတို့၏အစဉ်အလာအရရှောင်ကွင်း၍မရနိုင်သောရာသီလာမှုအတွက်ကြောင့်၊လက်လွှတ်ခဲ့ရသောအစာတခုသည်ယခုလက်ဝယ်အတွင်းမနီးလှသောကာလအချိန်အပိုင်းလောက်တွင်တဖန်ပြန်၍ရရှိတော့မည်ဟုတွေးတောမိရင်းပျော်ရွှင်၍အူမြူးနေသူအန်ကယ်ကျော်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်နောက်ပြီးအန်ကယ်ကျော်သည်ယခုလိုစိန်ပြေနပြေနှင့်ငြိမ့်နေရခြင်းအကြောင်းကားရှိလှပါသည်။တိုက်ရှေ့ခန်းတွင်ထားရှိခဲ့သောတူမတော်သည်ဟုပြောဆိုထားခဲ့သည့်မြမြအေး၏ဆွဲဆောင်မှုကိုယုံကြည်ထားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။သူတွေးတောထင်သည့်အတိုင်းပင်မြမြအေးကလည်းကွက်ကျော်မြင်နေမိပါသည်။အန်ကယ်ကျော်နှင့်ဝင်ရောက်၍စည်းဝါးရိုက်စရာမလိုတော့ပါ၊အန်ကယ်ကျော်အတွက်အကွက်ချသောစကားများကိုပြောဆိုနေပါတော့သည်။ဟာကွာဒို့ခုမှသတိရတယ်ဟေ့၊မင်းဒီမှာခနကြာမယ်မဟုတ်လားဟင်၊ဒို့ကိုကားခနပေးလိုက်ကွာကိစ္စကလေးတခုရှိလို့ဟေ့။ကြည်ကြည်မိုးသည်မြမြအေးထံမှထိုသို့သောစားတွေကိုကြားလိုက်ရသောအခါထခုန်မိမတတ်ဝမ်းသာ၍သွားမိပါသည်။မိမိအတွက်မပြေပျောက်သေးသောကိစ္စအ၀၀အတွက်အန်ကယ်ကျော်နှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှစ်ဦးသဘောတူတိုင်ပင်နှီးနှောချင်ပါသေးသည်။သို့သော်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမြမြအေးသာရှိနေသေးမည်ဆိုလျှင်စိတ်လွတ်လပ်မှုမရှိသည့်အတွက်မကျေမနပ်ဖြစ်နေရချိန်တွင်၊ထိုသို့သောစကားများကိုပြောဆိုလာသောအခါတွင်သူမအားယူသွားလေဟုစကားပြန်ပင်မပြောတော့ပါ၊ကားသော့အားလှမ်းပေးနေပါတေါ့ သည်။ထို့နောက်၊ မြမြအေးသည်ကြည်ကြည်မိုး၏ကားဖြင့်အပြင်သို့ထွက်ခွါသွားပေတော့သည်။Posted by myanmar-love-stories at 2:52 PM0commentsLabels: အချစ်ကြိမ်လုံးအချစ်ကြိမ်လုံး (၂)ဤတွင်အန်ကယ်ကျော်၏ အခန်းကဏ္တက စရုံပင်ရှိပါတော့သည်။ အန်ကယ်ကျော် တွေးထင်ထားသည့် အတိုင်းမြမြအေးသည် အန်ကယ်ကျော်၏ ရမ္မက်ကွန်ချာကျော့ကွင်းထဲသို့ ၀င်ရန်လမ်းဖွင့်သွားပါလေပြီး၊ ကျန်ရှိခဲ့သော မနုဿလူသားနှစ်ဦးမှာ ဆက်လက်၍လျှောက်လှမ်းယုံသာ ရှိပါတော့သည်။ဤသို့သောအဖြစ်မှာ စားနေကျကြောင်ဖါးကြီးဖြစ်သည့် အန်ကယ်ကျော်အဖို့ မခက်ခဲပါလေတော့သည်အသက်အရွယ်နှင့်မလိုက်ပါ။ တီတာရမည်လား။ ချော့မြူရမည်လား။ ဆွဲဆောင်ရမည်လား။ထို့ကြောင့် အန်ကယ်ကျော်သည် စားသောက်ခန်းမှနေ၍ ဧည့်ခန်းစားပွဲဆီသို့ ထွက်လာပါတော့သည်အော်၊ တူမတယေက်ထဲကိုး၊ မြမြအေးကော ဘယ်ထွက်သွားတာလဲ အားနာစရာကြီးကွယ်။ အန်ကယ်ကျော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကွာ။လာပါပြီး၊အန်ကယ်ကျော်လာပါပြီ။အန်ကယ်ကျော်စလာပါပြီး။မင်းသားဟန် တောင်ထားသည့် အန်ကယ်ကျော်စ၍လာပါပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ခင်းထားသောကွက်ကို မသိချင်ဟန်တောင်၍ ကကွက်ထဲသို့ဝင်လာပါချေပြီ။ကဲ ကဲ မင်းလဲပျင်းနေပါလိမ့်မယ်ကွယ်၊ဟိုရက်ပိုင်းတုန်းကပြထားတဲ့အနာကိုပြန်စစ် ကြည့်ရအောင်၊ ပေးလိုက်တဲ့ဆေးလဲမှန်မှန်စားရဲ့လားကွဲ့။အန်ကယ်ကျော်သည်အစစအရာရာတွင်လိမ္မာပါးနပ်သူပီပီ၊တယောက်တည်းမူပျက် လျှက်ကတုန်ကယင် ဖြစ်နေရှာသူကြည်ကြည်မိုးအား တကိုယ်လုံးရှိတောင့်သောဖြောင့် သောဖုထစ်နေသည့်အရာများကို အနုမြူအားမျှပြင်းထန်လျှက်ရှိသောရာဂခိုးတွေဝေနေ သည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့် လေ့လာရင်း စမ်းသပ်ခန်းသို့အရင် သွားခိုင်းလိုက်ပါတော့သည်။ကြည်ကြည်မိုးသည်စိတ်ညှို့ခံရသူသဖွယ် မိမိဘက်မှစကားတခွန်းမှပြန်မပြောနိုင်ဘဲ၊အန်ကယ်ကျောပြောဆိုသလို၊ညွန်ကြားသလိုလိုက်၍လုပ်ဆောင်နေမိပါတော့သည်။တချိန်တခါကရောက်ခဲ့ဘူးသော စမ်းသပ်ခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်မိသောအခါ၊ ကြက်သီး များတောင်ထ သွားပေသည်။ သို့သော် သောက်လေ၊ သောက်လေငတ်မပြေခဲ့သည့်ဆားငံရေကိုသောက်မိခဲ့သူပမာ၊ကြုံတွေ့ဘူးခဲ့သည့်ကာမအရသာကိုမြိန်မြိန်မြက်မြက်ကြီးခံစားမှုတွေကရှေးရှုထားခဲ့သည့်မို့ ကြောက်စိတ်နဲ့ ရှက်စိတ်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတဖန်ပြန်လည်ကြုံတွေ့လေဦးမည့်အရသာတမျိုးကိုမက်မောစွာဖြင့်စောင့်မျှော် နေရန်သာရှိပါတော့သည်။ထို့ပြင်ကြည်ကြည်မိုးသည်စမ်းသပ်ခန်းတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်လာဦးမည့်အမောသစ်တခုကိုရင်မောစွာဖြင့်စောင့်မျှော်နေရင်းကထူးခြားချက်တခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။စမ်းသပ်ခန်း၏နံရံတဘက်တချက်တွင်ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်အကြီးစားတခုကိုဆွဲချိတ်ထားကြောင်းတွေ့ရသောအခါတွင်မိန်းကလေးပီပီဗီဇကိုမပယ်ဖျောက်နိုင်မို့မိမိ၏ကိုယ်ဟန်ကျော့ရှင်းပုံသဏ္တန်ကိုထပ်တလဲလဲကြည့်ရှုချင်သောကြောင့်၊မိမိ၏တောင့်သောဖြောင့်သောကျစ်လစ်သောလှပကျော့ရှင်းသောကိုယ်ဟန်ကျော့ကျော့ကိုဟန်ရေးပြနေလျှက်ရှိပါသည်။ဤသို့သောအဖြစ်ကို၊ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှိတဘက်တချက်၌အန်ကယ်ကျော်စိမ်ပြေနပြေကသိုင်းရှုနေသည်ကိုတော့ကြည်ကြည်းမိုးမသိပါလေ၊ဤသို့သောမှန်သည်နောက်ဆုံးပေါ်လာသောမှန်သာဖြစ်သည်။မိမိဘက်ကကြည့်သော်မှန်ကဲ့သို့မြင်တွေ့ရ၍အခြားအဘက်ကကြည့်ရှုသော်မှန်အဖြစ်မမြင်ရဘဲ၊ဒိုးယိုပေါက်သဖွယ်ပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရသောမှန်ဖြစ်ကြောင်းကြည်ကြည်မိုးမသိပါလေတော့။ဒီယုံမြင်၍ဒီခြုံထွင်သားသည့်အန်ကယ်ကျော်ကတော့မိမိစားသုံးရလေမည့်ကာမပွဲတော်အတွက်မသုံးဆောင်ခင်စပ်ကြားသွားရေမြှားမြှားကျလျှက်၊ရာဂစိတ်များတဖွားဖွားဒီဂရီတိုးနေလျှက်ရှိနေသည့်အပြင်ပျော့ခွေနေသောသူ့၏လီးကြီးမှာလည်းရာဂသွေးတွေကြွတက်လာသည့်အမျှလုံချည်ကြားထဲမှထိုးထောင်လျှက်မတ်လာပါတော့သည်။ဤသို့ဖြင့်အန်ကယ်ကျော်သည်ဆက်လက်ကြည့်ရှုနေသောအချိန်ပိုင်းတွင်မှာကြည်ကြည်မိုးသည်ဘာစိတ်ကူးပေါက်၍လားမသိအပေါ်အင်္ဂျာီရင်စိနှိပ်သီးကိုတဖျတ်ဖျတ်ဆွဲဖြုတ်လိုက်သောအခါဝါဂွမ်းမျှနုဖတ်သောအသားဝါဆိုင်ကိုမြင်တွေ့ရပေသည်။ထို့ပြင်ရင်တွင်းနှစ်မွှာသည်ဖွံ့ဖြိုးတောင့်တင်းလှသောကြောင့်ဘရာစီယာအတွင်းမှရုန်းထွက်လာသဏ္တန်အသားတည်ရှိနေပေသည်။ထို့နောက်ဝတ်ထားသောလုံချည်ကိုအစမှဖြုတ်လျှက်ပါး စပ်ဖြင့်ကိုက်ချည်ထားစေပြီး၊ ပင်တီဘောင်းဘီကိုကုန်း၍ ချွတ်ချနေပုံကို မျက်ဝါးထင်ထင် ထပ်မံ၍ မြင်တွေ့နေရသောအခါတွင် ဤတွင်မိမိဝင်ရောက်ချန်တ်ပြီးဟုယူဆမိသည့်အပြိုင်နက်စမ်းသပ်ခန်းထဲသို့အန်ကယ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသောအခါ၊ကြည်ကြည်မိုးသည်ချွတ်ထားသည့်အပေါ်အင်္ဂျီာအားလျှင်မြန်စွာဖုံးအုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသောအခါ၊ကြည်ကြည်မိုးရှက်ဖြာနေမည်စိုးသောကြောင့်မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေပါတော့သည်။ဤသို့သောကိစ္စမျိုးအတွက်၊စပ်ယှက်ချိန်တွင်၊နှစ်ဦးသဘောတူရင်းနှီးမှုရှိလေမှကာမ၏အရသာစည်းစိမ်ကိုမိန်မိန်ကြီးခံစားရမည်မို့၊ ရှက်ခြင်း၊ကြောက်ခြင်းမရှိရလေအောင်အန်ကယ်ကျော်ကစတင်၍ဆွဲဆောင်နိုင်ရပေတော့မည်။ဟဲ ဟဲ လာလေကွယ်ကိုယ့်ဦးလေးလိုသဘောထားပေါ့ကွယ်၊ဆေးပညာအရပြောရရင်တော့ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပါဘူးကွယ်၊သက်သာတယ်မ ဟုတ်လားကွဲ့။ကြည်ကြည်မိုးသည်အတွေ့အကြုံရှိဘူးညားသောလည်းယခုလိုတစိမ်းတရံဖြင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်နေချန်တွင်ရင်လှိုင်းအားသည်တဖြတ်ဖြတ်ခုန်လျှက်ဒူးများကွေး0x150ွတ်မတတ်တုန်ခိုက်နေပေသည်။သို့သော်၊အန်ကယ်ကျော်၏ကွက်ကျော်မြင်မှုကြောင့်အစစအရာရာတွင်လည်းလိမ္မာပါးနပ်သူပီပီ၊ကြည်ကြည်မိုးတယောက်မကြောက်မရွံ့စေရန်အတွက်ဖက်လှဲတကင်းရေပက်မ၀င်နိုင်အောင်ဖေါ်ရွေလှသည်။စကားလုံးလှလှများဖြင့်0x150ှို့ယူဖမ်းစားထားပါသည်။ကဲ တူမရေ၊အချိန်ရှိတုန်းကြည့်လိုက်ရအောင်၊စမ်းသပ်ခုံပေါ်ကိုတက်ကွယ်၊အန်ကယ်ကျော်ဆီကိုရောက်လာတဲ့လူနာတိုင်းဟာနာကျင်သွားလို့အော်ယူရတဲ့လူနာဆိုတာမရှိပါ ဘူးကွယ် ဟဲ ဟဲအန်ကယ်ကျော်သည်ကြည်ကြည်မိုးကိုကြင်နာစွာဖြင့်လက်တွဲယူဆောင်လာပြီးသော်စမ်းသပ်ခုံပေါ်သို့လှဲအိပ်စေခိုင်းထားပါသည်။ထို့နောက်ပြေလျှော့နေသောသူမ၏လုံချည်ကိုအောက်ခြေမှနေ၍အသာအယာလှန်၍အပေါ်ဘက်သို့မတင်ပေးလိုက်ပါသည်။ပထမဦးစွာတွင်ဖြူဖွေးနုနယ်လှပြီးသွေးချေဥနေသည့်ခြေသလုံးဖွေးဖွေးကလေးများကိုမြင်ရပြီးပေါင်တွင်းသားရှိရောက်သောအခါတွင်သည်းလှိုက်အူလှိုက်သဖွယ်၊မိန်မိန်ကြီးခံစားနေရသောကြောင့်ကြက်သီးထသည့်ဘုကလေးများစွာကိုတွေ့ရှိရပေသည်။ထို့ပြင်၊တဖြေးဖြေးနှင့်ဆီးခုံ၏အပေါ်ပိုင်းသို့လှန်လိုက်တင်ထားပြီးသူမ၏ဒူးခေါင်းနှစ်ဘက်ကိုလည်းထောင်ထားသည့်ပုံစံကိုယူပြီးလျှင်ဘေးနှစ်ချမ်းသို့ခွဲဖြဲလိုက်သောအခါ။အာ၍၊ပြဲ၍၊လန်၍နီရဲတွဲကျနေသည့်အမွှေးအမျှင်များကင်းမဲ့လျှက်ရှိသောစောက်ဖုတ်ကြီးတခုကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့ရပါတော့သည်။အန်ကယ်ကျော်သည်စစ်ဆေးမည့်ဒဏ်ရာနေရာဖင်ဝ(ဗ္ဒဗူ)ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပါလေတော့၊0x150ှို့အားကြီးလွန်း၍ဖမ်းစားခံထားရသူပမာ၊သူ၏မျက်လုံးများသည်စောက်ဖုတ်ကြီးတပြင်လုံးအားငေးစိုက်၍ကြည့်နေပေသည်။၄င်းနောက်အားမလိုအားမရဖြစ်လာပြီး၊သူ၏လက်များကကြည်ကြည်မိုး၏စောက်ဖတ်ပြင်တခုလုံးအားထက်အောက်ပွတ်တိုက်၍ရွေ့လျားနေပါတော့သည်။ထို့ပြင်အထက်ပိုင်းရှိစောက်စေ့ကလေးကိုလက်မနှင့်လက်0x150ှိုးနှစ်ခုတို့ကြား0x150ှပ်၍ဆွဲကလိလိုက်သောအခါ၊ကြည်ကြည်မိုးသည်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာပြီးထွန့်ထွန့်လူးစပြု လာပါတော့သည်။သို့အဖြစ်ကိုမြင်လိုက်သောအန်ကယ်ကျော်သည်မိန်းမကျမ်းကျေခဲ့သူပီပီကာမ၏အရသာကိုနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ပိုမို၍စည်းစိမ်ခံစားနိုင်စေရန်အတွက်ကာမ၏ခလုပ်များကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေပါတော့သည်။ထို့နောက်အန်ကယ်ကျော်သည်သူ၏စိတ်များပင်မထိန်းသိမ်းတော့သည့်လား၊ဒါမှမဟုတ်ကြည်ကြည်မိုး၏ရာဂပိုးများအားပိုမိုနိုးကြားလာစေရန်အတွက်လားတော့မသိ၊ကြည်ကြည်မိုး၏အလယ်ခွဆုံတွင်သေချာဂနစွာဖြင့်ဒူးထောက်ရပ်စေပြီးပြဲအာ၍ကျနေသည့်စောက်ဖုတ်ပြင်တခုလုံးအားလျှာဖြင့်ယက်နေပါတော့သည်။ထို့ပြင်စောက်စေ့ကလေးကိုလျှာဖြင့်ကလိလိုက်၊စုတ်လိုက်နှင့်ကြိမ်ဖန်များစွာကလိပေးလိုက်သောအခါတွင်၊အား အား အီး အီးယားလိုက်တာအန်ကယ်ရယ်ဟင့်ဟင့်၊ကြည်ကြည်မိုးလည်းရာဂပိုးများ၏ရမက်ဆန္ဒအရမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်မိမိဖင်ကြီးကိုအပေါ်သို့တအားမြှောက်ထားလျှက်လက်များကလည်းစမ်းသပ်ခုံဘေးရှိနံစောင်းနျစ်ဖက်ကိုတင်းကြပ်စွာကိုင်ထားလေသည့်ပြင်၊မပီမသသောဝိုးဝါးသံများဖြင့်၊ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးသောအရသာတခုကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ခံစားနေရသည့်အလား၊ကျေနပ်အားရသည့်အသံများကထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ဤသို့အပြင်အန်ကယ်ကျော်သည်ကြည်ကြည်မနိုး၏စောက်ခေါင်းဝအားနှုတ်ခမ်းချင်းတေ့လျှက်စုတ်ယူနမ်းရှုံ့သလိုပြုလုပ်ပေးနေသောအခါတွင်၊ကြည်ကြည်မိုး၏ရာဂပိုးများသည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမို၍သောင်းကျန်းနေပါတော့သည်ကြည်ကြည်မိုး၏စိတ်ဆန္ဒများကဤသို့ထကြွသောင်းကျန်းမှုသည်အန်ကယ်ကျော်၏က္မမ်းကျင်လိမ္မာပါးနပ်စွာဖြင့်ဖွင့်ဟနေမှုကြောင့်ဖြစ်သည့်အပြင်၊သူမသည်မကြာမိကမှမိန်းမတို့၏ဓမ္မတာအတိုင်းရာသီလာမှုပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်သာမာန်အချန်ထက်ရာသီသွေးပြီးစီးပြီးမြောက်သည့်အချိန်တွင်ရာဂပိုးများအတွက်နှိုးဆွမှုသည်လျင်မြန်စွာထိရောက်မှုရှိပေသည်၊အစာတခုခုကိုတမ်းတမ်းတတဖြင့်ဆာလောင်မွတ်ငတ်နေသည့်အလား၊လိုလိုလားလားဖြင့်ကာမစပ်ယှက်ဖို့ဆန္ဒအရှိဆုံးအ ချိန်ဖြစ်ပါသည်။(ဥပမာ၊အမဲသားကိုရိုးရိုးရေဖြင့်ပြုတ်သည်ထက်၊ရှာလကာရေများနှင့်ပြုတ်ခဲ့လျှင်အမဲသားမှာနူးလွယ်သည်ဆိုသည့်သာဓကတရပ်ကိုတင်ပြအပ်ပါသည်။)ထို့ကြောင့်ထိုသို့သောအခါများတွင်မိန်းကလေးများသည်ရာဂစိတ်များမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတုးပွားစေ၍ကာမစပ်ယှက်ရာတွင်လည်းပိုမို၍စတ်အားထက်သန်ကြပေသည်။မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ရာဂပိုးများထကြွသောင်းကျန်းမှုကိုမှနှစ်ခြိုက်ကြသူများရာသီပြီးမြောက်ပြီးစီးသည့်အချိန်နောက်ပိုင်းတွင်ဆက်ဆံကြပါကုန်။ကြည်ကြည်မိုးသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းများလောက်ကပင်ရာသီလာမှုပြီးစီးထားပါသည်ထို့ပြင်အန်ကယ်ကျော်၏ကာမနှိုးဆွမှုသည်ကြင်ကြင်နာနာကမ်းကမ်းကျင်ကျင်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ထားပေးလာသည့်အတွက်၊တီကောင်ဆားပက်ခံလာရသလိုတကိုယ်လုံးသည်ထွန့်ထွန့်လူးလွန့်လျှက်ဃနာမငြိမ်လျက်ရှိပါတော့သည်။အား အား ကတ်ကတ်ကောင်းလိုက်တာအန်ကယ်ကျော်ဘယ်လိုများလုပ်ပေးနေတာလဲကွယ်၊ကြည်ကြည်ဖြင့်တချီတောင်ပြီးခါနီးပြီး၊ ဟုပြောရင်းဆိုရင်းကပင်စောက်ခေါင်းဝကိုလက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ဖြဲ၍လျှာဖြင့်သော်၎င်းပါးစပ်ဖြင့်သော်၎င်းစုတ်ယူနမ်းယက်ပေးနေလျှက်ရှိသောအန်ကယ်ကျော်၏ဦးခေါင်းကိုသူမ၏လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်တအားဖိထားစေပြီး၊ဖင်ကိုလည်းအပေါ်သို့မြောက်နိုင်သမျှမြောက်အောင်အစွမ်းကုန်ထောင်၍ကားပေးနေလျှက်ရှိပါတော့သည်။ထိုနည်းတူအန်ကယ်ကျော်ကလည်းကြည်ကြည်မိုးနှင့်အပြိုင်ကြဲ၍အားကုန်စုတ်လျှက်လျှာဖျားဖြင့်ယက်ပေးနေသောအခါတွင်၊ကြည်ကြည်မိုးသည်သူမ၏ကိုယ်လုံးအားရှေ့တိုးနောက်ငင်သဖွယ်ပြုလုပ်ပေးပြီး၊ကာမ၏အရသာကိုမိန်မိန်ကြီးခံစားနေရသူသဖွယ်တဟင့်ဟင့်၊တဟဲဟဲဖြင့်၊ တရှူးရှူးတရှဲရှဲမည်သံပေါင်းစုံနဲ့အတူခြေပစ်လက်ပစ်ကျရောက်သွားပါတော့သည်။ဤသည်ကိုသတိထားမိသောအန်ကယ်ကျော်သည်လျှာဖြင့်ယက်ခြင်းမှရပ်ဆိုင်းပြီး၊ဟဲ ဟဲ အရသာကောင်းကိုခံစားလို့ရပြီးလားကွဲ့၊စိတ်သာချတူမရေ၊ဒီထက်ကောင်းအောင်ဆက်လုပ်ပေးအုန်းမယ်နော်။ကြည်ကြည်မိုးသည်အထွတ်အထိပ်သို့မြင့်မားစွာရောက်ရှိနေချန်တွင်အောက်သို့လှိမ့်ကျ၍အသဲအေးစွာဖြင့်ရင်ဖိုမောလှိုက်ခံစားနေရချိန်တွင်၊အန်ကယ်ကျော်မှထိုသို့သောစကားတို့ကိုထပ်လောင်း၍ကြားသိရလေသောအခါမှေးစင်း၍ဇိမ်ဖြင့်မိန်းမောနေသောမျက်ဝန်းနှစ်စုံသည်မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်ဖြင့်ပွင့်လာစေပြီးမပီသသောဝိုးတ၀ါးညည်းသံများကပေါ်ထွက်လာပါသေးတော့သည်။ထို့ပြင်ကာမ၏အရသာကိုမိန်မိန်မြက်မြက်ကြီးတချီတမောင်းခံစားပြီးစီးသောလည်းနောက်ထပ်တချိန်တဖန်ထပ်မံ၍ခံစားလိုသေးသည့်သူမ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရာဂတဏှာခိုးတွေဖြင့်ရစ်ဝိုင်း၍နေပါသေးသည်ကိုမြင်တွေ့လျှက်ရှိပါတော့သည်။အန်ကယ်ကျော်သည်အသက်ကြီးရင့်ပြီးဖြစ်ပါသော်လည်းမမောမပန်းသေးပါ။ခုမှစလုံးရေစခါပင်ရှိပါသေးသည်။ကြည်ကြည်မိုးအတွက်ပထမဆုံးအချီပြီးမြောက်ထားသည်မှာ ၁၀မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါတွင်၊အန်ကယ်ကျော်သည်ဒူးထောက်နေရာမှမတ်တပ်ရပ်လျှက်သူ၏မပြီးဆုံးသောကာမ၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရလေအောင်တဖန်ပြန်လည်၍ဆွဲဆောင်ယူရန်တာဆူမိနေပါ တော့သည်။ကြည်ကြည်မိုး၏၀မ်းဘိုက်ပြင်ဖြူဖြူဖွေးနုကိုထူထဲသောနုတ်ခမ်းကလေးများဖြင့်ပွတ်တုက်ဆွဲယူလာစေပြီးကျန်ရှိနေသေးသောဘရာစီယာကိုလက်တဘက်ကသူမ၏ကျောအောက်သို့လျှိုနှိုက်၍ချိတ်ကိုဆွဲဖြုတ်ချလိုက်လေသည်။ကြည်ကြည်မိုးသည်ငယ်ရွယ်သူမို့သွေးသားတက်စချိန်ပင်ဖြစ်သည့်အပြင်၊ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်မိခင်လောင်းတဦးပီသလျှက်ရှိပါသည်။သူမ၏နို့နှစ်လုံးသည်မာမာကျစ်ကျစ်ဖြင့်လုံးဝိုင်းစက်၍အိစက်ညက်ညောလှပါသည်။အန်ကယ်ကျော်၏အကြိုက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။အန်ကယ်ကျော်သည်စိတ်ကြိုက်တွေ့ဆုံနေရသောနို့နှစ်လုံးအားပယ်ပယ်ကြီးနယ်လျှက်ရှိစေပြီး၊နို့လုံး၏နို့သီးခေါင်းထိပ်သည်ခ္မန်မြမြသဏ္တာန်ဖြစ်နေစေသည်ကိုလက်မနှင့်လက်0x150ှိုးနှစ်ခုတို့ကလည်းအသာအယာချေမွပေးနေလျှက်ရှိပြန်ပါသေးသည်။ထို့ပြင်နို့နှစ်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ရုန်းမထွက်မနိုင်အောင်ဖိဖိစီးစီးဖြင့်ဆုတ်ကိုင်ထားစေပြီးအန်ကယ်ကျော်၏ပြောင်ချောနေသောထိပ်ပြောင်ဦးခေါင်းဖြင့်နို့နှစ်လုံးကြားထဲသို့ဘယ်ပြန်ည်ပြန်ပွတ်သတ်နေပြန်သောအခါ။ယား ယားလိုက်တာအန်ကယ်ရာ၊ဟဲဟဲဟဲ၊ ခစ်ခစ်ခစ်၊ကဲကွယ်တော်ပါတော့ကွယ်၊ကလေးလေးကျနေတာဘဲနော်၊အသက်ကြီးတော့မှတော်တော်ခဲနော်၊ဟင့်ဟင့်လူကြီးကိုကကြည်ကြည်မိုးသည်ထိုသို့သောစကားများကိုခရာတာတာ0x150ုတုတုဖြင့်ပြောဆိုနေသော်လည်း၊စိတ်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရှိနေသည်အလား၊အန်ကယ်ကျော်၏ဂုတ်ပိုးသားကိုလက်နှစ်ဘက်ဖြင့်တင်းကြပ်စွာပွေ့ဖက်ထားသည့်အပြင်ရာဂပိုးများ၏ဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့သည်အလား၊စေ့ထားလျှက်ရှိသောပေါင်နှစ်ချောင်းကိုရှေ့နောက်ပွတ်တိုက်လျှက်ရှိနေပါ တော့သည်။ဤသို့ဖြင့်အန်ကယ်ကျော်သည်လည်းမနေနိုင်တော့ပါ၊သူ၏ရာဂပိုးများသည်အစာကိုတောင်းတလျှက်ရှိပါတော့သည်။ထောင်မတ်နေသောလီးကြီးကတဆတ်ဆတ်ဖြင့်တုန်လှုပ်နေသည်ကသက်သေပြလျက်ရှိပါတော့သည်။ထို့ကြောင့်နှိုးဆွမှုများကိုတဖန်ရပ်ဆိုင်းစေပြီးလျှင်စမ်းသပ်ခုံပေါ်ရှိလဲလျောင်းနေသောကြည်ကြည်မိုး၏ခြေရင်းမှပတ်ဝင်၍သူမ၏ဖြေနှစ်ဘက်ကိုအပေါ်ပိုင်းသို့မြောက်၍ကားပေးစေသောအခါတွင်၊နိုးဆွမှုပေးထားသောကြောင့်ထွက်ပေါ်လာစေသည့်ကာမအရည်ကြည်များနှင့်ခုနကအန်ကယ်ကျော်၏(္နသကအ့ ဥမါညေ)မှုတ်ပေးလိုက်သောအခါ၊တချီပြီးစီးသွားသည့်ရာဂသွေးများကြောင့်အရည်များပြည့်လျှံနေပါတော့သည်။ထို့ပြင်စောက်ဖုတ်အတွင်းကြားမှခြေထောက်များမြှောက်၍မတင်လိုက်သောအခါတွင်သုတ်ပိုးရည်များသည်အပြင်ဘက်သို့ထွက်လျှံကျလာပြီးသူမ၏ဖင်ကြားဝသို့စီးဆင်းသွားပါသည်။အန်ကယ်ကျော်သည်ကာမရည်များကိုမသုတ်တော့ပါ။အကယ်၍များကာမအရည်များကိုသုတ်ပစ်လိုက်လျှင်ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းဖြင့်ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်ရှိသော်၊ဖီလင်ပျက်သွားပေလိမ့်မည်။ယခုလိုဆိုတော့သူ၏လီးကြီး၊ရှည်လျားသောလီးကြီးအတွက်စောက်ဖုတ်0xJokိ့သွင်းချိန်တွင်အထောက်အကူပြုနေမည့်အတွက်စောက်ဖုတ်ဝတွင်ပေကျန်နေသောအရည်များကိုမသုတ်စေဘဲလီးဒစ်ဖြင့်အသာအယာတေ့ထားစေပြီးအားများများဖြင့်ဆောင့်သွင်းချလိုက်ပါတော့သည်။အန်ကယ်ကျော်ထင်သည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်လာပါတော့သည်။ကာမအရည်များ၏အထောက်အကူကြောင့်၊အန်ကယ်ကျော်၏ကြီးမားသောလီးကြီးကိုစောက်ဖုတ်ခေါင်းထဲဝင်သွားသော်လည်းသူမ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နာကျင်မှုဟန်မပြပါချေ၊ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရှိ သည့်မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရသောအခါ။တ၀က်ခန့်မျှဝင်နေသောလီးကြီးကိုဒစ်ထွက်အောင်ပြန်နှုတ်စေပြီး၊အားရှိပါးရှိပြန်ဆောင့်ချလိုက်ပါသည်။ရှည်လျားသောလီးကြီးသည်အရင်းထိအောင်ဝင်သွားပါတော့သည်အားပါးပါးခုမှဘဲအယားပြေတော့တယ်အန်ကယ်ရယ်၊ခုချိန်မှရာဂပိုးတွေသောင်းကျန်းမှုအတွက်ဘယ်ဆေးမှမတိုးဘူး၊ဘယ်လိုဆေးမျိုးနှင့်မှကုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အန်ကယ်ရဲ့လီးကြီးနဲ့ကျတော့ဓါတ်တဲ့တယ်တူပါတယ်နော်၊ ဟင်း ခုမှရင်ထဲမှာဟာနေတာပျောက်သွားသလိုပါဘဲ။ ကြည်ကြည်မိုးသည်၊အာသာစိတ်ပြေပျောက်သဏ္တာန်ရှိကြောင်းမက်မက်မောမောပြန်ပြောနေသော်လည်းအရင်းဆုံးထိဝင်ရောက်နေသောလီးကြီးကရပ်တံ့နေပေမဲ့၊သူမကတော့ထောင်ထားဖြဲထားသောဖင်ကြီးအစုံကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်ပြုလုပ်နေဆဲရှိပါသေးသည
နို့သီးခေါင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်လိုက်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ညာလက်နဲ့ကလိနေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ညိုးနဲ့လက်မကြားမှာဖိညှပ်လိုက်လုပ်နေရင်းအရည်တွေထွက်လာမှန်းသိလိုက်တယ်။” အအအအ” အကို ... အ ..ဟာ ယားတယ်။အချစ်ရည်တွေက သူမရဲ့ကိုယ်တွင်းကနေ စိမ့်ထွက်လာပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ဖြဲပြီး သူမရဲ့ အောက်ပိုင်းကို ကျွန်တော်ဟာလျှာနဲ့ ဖိကပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေလဲ ထိရောက်လိုလားမသိသူမတကိုယ်လုံးတွန့်လိမ့်လာတယ်။စောက်ဖုတ်အနားကိုလျှာနဲ့ထိုးလှန်လိုက် နုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ညှစ်လိုက်လုပ်နေတော့စောက်ရည်ကပံ့ထုတ်လိုက်သေးတေ ။အားရပါးရလုပ်ချင်လာတာနဲ့ နို့စို့ပေးနေတာကိုရပ်လိုက်ပြီး။ခက်ပျို့ ပျို့ အရသာခံကြည့်ရင်း။လီးကြီးကခံနိုင်ရည်မရှိတောလို့ လိုးထည့်လိုက်တယ်။သူမက နှစ်ခါပြီးလောက်ပြီးမို့ ကျနော်လည်း ဆောင့်ချက်တွေလဲ ပိုပြင်းလာတယ်။ ကာမစိတ်ကထိပ်ဆုံးထိရောက်လာပြီမို့” အား…အား… မခံနိုင်တော့ဘူး။ မခံ…နိုင် ....နိုင်.တော့ ....အား ...ကောင်းလိုက်တာ.” လက်နှစ်ဖက်ကို သူမရဲ့ရင်သားတွေပေါ် တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နို့နှစ်လုံးကို ဖမ်းဆုပ်ထားရင်း ခါးအားကို ပိုတင်လိုက်တယ်။” အား… ဟို..ဟို…အရမ်းပြီးချင်လာပြီ။ မအောင့်နိုင်တော့ဘူး။အကို ရယ်....ပြီးပါရစေတော့……” သူမ ဘယ်လိုမှမအောင့်နိုင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။ အတူတူပြီးမယ်လို့ သေသေချာချာပြောခံထား ရလို့ အရင်ပြီးရမှာကို အားနာနေပုံတော့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သဲသောင်ပြင်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ သဲအိမ်လေးဟာ လှိုင်းသေးသေးလေးနဲ့ တွေ့ရင်တောင် ပျက်ဆီးသွားရသလိုပဲ သူမဟာ ကာမဒီရေလှိုင်း တွေထဲမှာ မျောချင်တိုင်းမျောသွား လေတော့တယ်။ရင်သားနှစ်လွှာက အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ ကခုန်နေတယ်။ ပင်လယ်နားက ဒီရေလို့အတက်အဆင်းနဲ့ သဘာဝကျနေသည်။ ဟန်ချက်ကိုက်သော သံစိုင်လှိုင်းလိုပေါ့။အသက်ရှုသံ ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကို ကြားနေရတယ်။ ရှက်လဲရှက်၊ အားလဲနာတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို မော်ကြည့် လာတယ်။
တခါတခါပြန်တွေးတော့မိတော့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းကိုပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကောင်းမလေးတယောက်ကို လိုက်ပိုးမိပါတယ်။ ဗွီဒီယိုဖိုင်